ဗီဒီယိုက ချက်တင် အီတလီ
ချမ်းသာတဲ့ရှာဖွေနေအမျိုးသမီးအမျိုးသားဒီနေရာမှာသင်၏စာရင်းရှာဖွေနေအမျိုးသမီးယောက်ျားကိုယ်ဝန်ရရန်နှင့်၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များအတွက်အခမဲ့။ ဒီသကြားမာမီရွာေဖြ။ ဒီနေရာကိုရှာဖွေရှာဖွေနေအမျိုးသမီးယောက်ျားကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်သောရဖို့အခုအချိန်မှာ။ သင်ပြုလိုသမျှကိုရန်ဖြစ်သည်ချက်တင်နှင့်အတူသူတို့ကိုရရှိဖို့သူတို့ရှိသည့်နေရာ။ သေချာအောင်သူတို့ကိုသင်ရသည့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်။ သူတို့ကသင်ဆပ်လိမ့်မည်။ သကြားမာမီဆိုက်သည်ချိန်းတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာဝက်ဘ်ဆိုက်သင်တက်ချိတ်နှင့်အတူသင့်အချစ်ကမ္ဘာအနှံ့။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အသကြားပုတ္ခ်သကြားဓာတ်ဖေဖေ၊သကြားမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများကြား။ သင် မှတ်ပုံတင်များအတွက် ။ အချစ်သောသူသည်ကြွယ်ဝဖို့လုံလောက်တဲ့ကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်? ဟုတ်တယ်ဆိုရင်၊သင်သည်လက်ျာနေရာ၌ရှိကြ၏။ ဒီနေရာမှာ၊သင်ချိန်းတွေ့စတင်သင့်နှင့်အတူပေးဆောင်ရာက္ဖူးတဲ့။ ကောင်းသောအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သကြားမာမီချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်မပါဘဲအခမဲ့။ သင်လိုအပ်သမျှသောရရန်ညွှန်ကြားသကြားမာမီဖုန်းနံပါတ်နှင့်ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူစကားပြော။ တွေ့ဆုံပြီးတစ်ဦးတစ်ယောက်၊ဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်၊အာရှတစ်ဦးတစ်၊ရုရှားနိုင်ငံတစ်ဦးတစ်၊အာဖရိကနှင့်ပို။ ကျော်ရှိပါတယ်သန်းသကြားင္လွ်င္အခုတော့အွန်လိုင်းအတွက်အဆင်သင့်။ သူတို့ကငွေရတတ်ယူမှသင်၏ကြေး။ သင်မျှဝေဤပို့စ်မှချိတ်ဆက်ပါ။
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘဲ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လူသစ်တွေ့ဆုံရန်။ ချိန်းတွေ့။ လူသစ်တွေ့ဆုံရန်အပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်။
အဲမဟုတ်ဤမျှလောက်များစွာသောချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အရာသင်အသုံးပွုနိုငျမပါဘဲ။ ဤဆိုဒ်အများအားဖြင့်ရှိပါဘူးဒါကြောင့်အများကြီး။ ပြီးနောက်တိုတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်၊သင်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိုဖိုင်အားလုံးသက်သက်မဟုတ်၊အပြည့်အဝအများပြည်သူသူမြား။
ငါဘာသာျပန္ခ်က္မြဲတစ်ညှို့အတွက်အီတလီ၏အိပ်မက်ရှိသွားမေတ္တာသည်သူတို့၏အစားအစာနှင့်အရာအားလုံးနှင့်အတူလုပ်ဖို့။ အီတလီအမျိုးသားများအကျောက်။ သင်ကြိုးစားချင်နိုင်ပါသည်အောက်ပါစားသောက်ဆိုင်များရှိသည်သောစစ်မှန်အီတလီအစားအစာ၊ကစီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိအီတလီ၊လူအများစုမှာအလုပ်လုပ်သောသူရှိပါတယ်၊အီတလီ၊အများကြီးဖောက်သည်အီတလီလွန်းသည်အခြားနည်းလမ်းကောင်း(အရာသည်လည်းအခမဲ့များအတွက်အများဆုံးပြဲႏွ)ကိုသွားဖို့အီတလီတက္ကသိုလ်၏ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ၊ အနီးကပ်မှအကျဉ်းချုပ်။ သင်ရရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ဦးစားပွဲထိုးအလုပ်မှာအီတလီစားသောက်ဆိုင်။ အဘယ်မှာရှိကြောင်းငါတွေ့ငါ့အီတလီ ။ ငါအဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ၏မိသားစု။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ရနိုင်အီတလီအမျိုးသားများနှင့်အီတလီအစားအစာအားလုံးအတွက်တစ်နေရာတည်း။ ရယ်ရတယ်။ ရှိပါကသင်ငွေအလုံအလောက်သွားနိုင်အီတလီနိုင်ငံမှ။ အများကြီးရှိပါတယ်အီတလီအမျိုးသားများရှိပါတယ်။ ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊
လူကြိုက်အစားထိုးဖို့ များ။ စူးစမ်းရှစ် ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့လီေတူ ၊အားလုံးအကြံပြုအားဖြင့်အဆင့်မှအခြားရွေးချယ်စရာအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ အီတလီချိန်းတွေ့စကားပြောသည်ဝမ်းမြောက်စရာအရပ်ကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်တွေ့လတ်ဆတ်သော။ ပာချက်ချင်းနှင့်အတူလတ်ဆတ်တဲ့လူတွေကအနီးအနားသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့။ သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ။ ကျပန်းစကားပြောနှင့်အတူအိမ်မှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ တွေ့ဆုံလတ်ဆတ်တဲ့လူတွေကနှင့်အကြောင်းပြောဆိုအဘယျသို့အရေးပါပါတယ်။ ။ အခြားရွေးချယ်စရာ သို့မဟုတ် ။ စာသားသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်။ အမွတ္မီးေလိုအပ်တဲ့၊အသုံးပြု ။ ချန်နယ်သည်သာမန်လမ်း ပို့စ်အကြောင်း၊အတွေ့၊အကြောင်းပြောဆိုတစုံတခုကိုအလျင်အမြန်ဝှက်။ နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖွင့်၊အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ၊အဘယ်သူမျှမ။ မျောက်တစ်နေရာမှဖြည့်ဆည်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှတဆင့်တဦးတည်းအပေါ်ရုပ်ရှင်တော်။ တဦးတည်းအပေါ်ရုပ်ရှင်ခၚ ကိုရုပ်ရှင်နှင့်အတူစကားပြောမိတ်ဆွေများကို၊မိသားစုကို၊နှင့်အစိမ်းကိုလုံးဝအခမဲ့။ အမွတ္ဒါင္းလိုအပ်သည်။ အခမဲ့မက်ပြတင်းပေါက် ဝဘ်ပြတင်းပေါက်မိုဘိုင်း။ အန္း ဘ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာကိရိယာပြတင်းပေါက် အန္းတက်ဘလက်ဖုန်းပက်ဘဆယ်ပန်းသီးရုပ်သံညှိမီးအခြားရွေးချယ်စရာအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်နှင့်သင်ပိုကောင်းအခြားရွေးချယ်စရာထုတ်ကုန်ကိုအချစ်နှင့်အမုန်း။ ဆိုက်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည် နှင့် ဆွီဒင်၊နှင့်အတူတွေအများကြီးမှအကူအညီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်အီတလီနိုင်ငံ၊ဖင်လန်နိုင်ငံ၊အက်စ်နှင့်မျှဝေသူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ မှန်သည်၊လူအပေါင်းတို့သည်စာရင်းများရွေးချယ်စရာတွေကိုလူအစုအဝေးဖြစ်ပြီးရရှိ၊နှင့်အဘယ်သို့သောအချက်အလက်စွမ်းထက်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ။ လူကြိုက်အစားထိုးဖို့ များ။ စူးစမ်းရှစ် ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့လီေတူ ၊အားလုံး အကြံပြုအားဖြင့်အဆင့်မှအခြားရွေးချယ်စရာအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ အီတလီချိန်းတွေ့စကားပြောသည်ဝမ်းမြောက်စရာအရပ်ကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်တွေ့လတ်ဆတ်သော။ ပာချက်ချင်းနှင့်အတူလတ်ဆတ်တဲ့လူတွေကအနီးအနားသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့။ သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ။ ကျပန်းစကားပြောနှင့်အတူအိမ်မှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ တွေ့ဆုံလတ်ဆတ်တဲ့လူတွေကနှင့်အကြောင်းပြောဆိုအဘယျသို့အရေးပါပါတယ်။ ။ အခြားရွေးချယ်စရာ သို့မဟုတ် ။ စာသားသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်။ အမွတ္မီးေလိုအပ်တဲ့၊အသုံးပြု ။ ချန်နယ်တစ်မူလတန်းလမ်းမှပို့စ်အကြောင်း၊အတွေ့၊အကြောင်းပြောဆိုတစုံတခုကိုအလျင်အမြန်ဝှက်။ နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖွင့်၊အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ၊အဘယ်သူမျှမ။ မျောက်တစ်နေရာမှဖြည့်ဆည်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှတဆင့်တဦးတည်းအပေါ်ရုပ်ရှင်တော်။ တဦးတည်းအပေါ်ရုပ်ရှင်ခၚ ကိုရုပ်ရှင်နှင့်အတူစကားပြောမိတ်ဆွေများကို၊မိသားစုကို၊နှင့်အစိမ်းများထံမှလုံးဝအခမဲ့။ အမွတ္ဒါင္းလိုအပ်သည်။ အခမဲ့မက်ပြတင်းပေါက် ဝဘ်ပြတင်းပေါက်မိုဘိုင်း။ အန္း ဘ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာကိရိယာပြတင်းပေါက် အန္းတက်ဘလက်ဖုန်းပက်ဘဆယ်ပန်းသီးရုပ်သံညှိမီးအခြားရွေးချယ်စရာအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်နှင့်သင်ပိုကောင်းအခြားရွေးချယ်စရာထုတ်ကုန်ကိုအချစ်နှင့်အမုန်း။ ဆိုက်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည် နှင့် ဆွီဒင်၊နှင့်အတူတွေအများကြီးမှအကူအညီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်အီတလီနိုင်ငံ၊ဖင်လန်နိုင်ငံ၊အက်စ်နှင့်မျှဝေသူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ မှန်သည်၊လူအပေါင်းတို့သည်စာရင်းများရွေးချယ်စရာတွေကိုလူအစုအဝေးဖြစ်ပြီးရရှိ၊နှင့်အဘယ်သို့သောအချက်အလက်စွမ်းထက်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ။
ပထမ၊သူတွေအတွက်လုံးဝအသစ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အီတလီအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းခွင့်ပြုပါသင်ပြောပြရန်အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်ကနေအားလုံးသည်ကမ္ဘာအနှံ့ကနေတဆင့်မန်သည်။ သငျသညျပေးပို့နိုင်ပါတယ်အဖြစ်အများအပြားသို့မဟုတ်အဖြစ်အနည်းငယ်မက်ဆေ့ခ်ျများအဖြစ်၊သင်ကြိုက်အဘယ်အဖွဲ့ဝင်များဆန္ဒရှိ။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကောင်းစိတ်ကူးကိုပဲပိုအထွေထွေနှုတ်ခွန်းဆက်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ဖို့သင်ကိုယ်တိုင်စတင်ခင်မှာလည်းအများအပြားပေးပို့ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်သောအီတလီစကားပြောဖိုရမ်လည်းခွင့်ပြုပေးပို့ဖို့အဖုံဖုံနှင့်စတစ်ကာများ၊အလားတူအခြားလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ဆိုဒ်များ ။ ဒါကြောင့်၊သင်ညပ်နေအဘို့အစကား၊အသံုးျပဳတယ္။ နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအားသာချက်၏သုံး၍ချက်တင်ဆိုဒ်များသင်စတင်နိုင်ပါသည်အုပ်စုစကားပြောဆိုချက်တွေကို။ ဤသည်ကြီးများအပြားအကြောင်းရင်းများ။ သိသိသာသာ၊သင်ဟောပြောဖို့ပိုထက်တစ်ကြိမ်မှာလူတဦး၊အရာသည်အပိုဆု။ ဒါပေမယ့်ဒါ့အပြင်၊ဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူပါစေ သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်သင့်အလားအလာပွဲစဉ်ပါတယ္။ သငျသညျရရနိုင်ကြသည်သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆအဘယ်အရာကိုမြင်သူတို့ထင်လုပ်မီကသင်သည်မည်သည့်အလေးအနက်။ နားထောင်ပြီးပြီးနောက်ထံမှတုံ့ပြန်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအသုံးပြုသူများပြီကတည်းကဖန်တီး၍ဗီဒီယိုစကားပြော။ ဤသည်ကြီးစွာသောအထိနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်ခံရကြပြီ၊အလွန်အအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်။ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အီတလီအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းကြောင်းသေချာစေတစ်ခုခုကိုသင်ရှိသည်သာကမ်သို့မဟုတ်တစ်ခုချိတ်ဆက်ကနေတဆင့်အက်စ်ဘီတယ်။ ကျနော်တို့နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်နာများဖန်တီးရန်အခွင့်ပြုကြောင်းအားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုခံစားဖို့အရည်အသွေးမြင့်မားအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်။ သတိရ၊ရအများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်များအသုံးပြု၍ဗီဒီယိုစကားပြောစား၊အစဉ်မပြတ်သေချာအောင်သင်ရေတွင်းတစ်တွင်း-အလင်းအခန်းနှင့်အားႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေ။ ဒါကြောင့်၊အဲဒီမှာသင်ရှိသည်၊တစ်ဦးရှင်းပြ၏အနည်းငယ်များအပေါ်ရရှိနိုင်သောအခမဲ့အီတလီအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။
အင်တာနက်။ သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှာဖို့မှာသူတို့အသင်းတော်၏သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း။ သူကေျပာ’ဟုတ်ကဲ့’နှင့်ကုသအတွက်သင်အများကြီးပိုပြီးအထူးအလမ်းထက်သူရယူထားသောအခြားအမျိုးသမီးများ၊အစေ့စေ့သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒ၊နှင့်ခဲ့ပြီငါ့အတွေ့အကြုံအများဆုံးယောက်ျားကဲ့သို့ကိုထိန်းချုပ်အတွက်ဖြစ်၏။ သူတို့ခံစားရလေ့ခြိမ်းခြောက်သို့မဟုတ်ဖိအားပေးခံရသည့်အခါအမျိုးသမီးဇာတ်တာဝန်ခံယူ။ သူအများစုသည်ယောက်ျား အတွက်အဆင်သင့်တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည်လိမ့်မယ်ပြဿနာမရှိအောင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို။ လျှင်သင့်ရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ယိုအချို့အလေးအနက်အမြွက်၊ပြီးတော့အတော်လေးဖွယ်ရှိမဟုတ်ကြောင်းအဘို့အဆင်သင့်သောအဆင့်ကတိကဝတ်များ၏။ မှတပါး၊ဒါကြောင့်မကြာခဏပိုကောင်းအထိစောင့်ဖို့သူအဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့၊သူသည်မိမိရဲ့ဖိသို့တစ်နှစ်ခွဲ-နှလုံးတိရှိလိမ့်မည်များစွာစိတ်ထိခိုက်။ နှင့်၊တစ်ခါတစ်ရံဖိအားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းတစ်ဆက်ဆံရေးရှိသည်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်စိုက်ပျိုးတစ်ခုခုသို့ ကြီးမြတ်အချိန်နှင့်အတူ၊ညှိုးနွမ်းသွေ့ခြောက်ပြီးသေဆုံးသောကြောင့်ကိုင်တွယ်ပျာ။ မှလူနာဖြစ်ပြီးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းဖို့’လာပတ်ပတ်လည်’၊သူသည်ဟန်ဆန္ဒကျူးလွန်ဖို့မည်သည့်အချိန်၌အနီးရှိအနာဂတ်၊ထိုအခါထိုဆက်ဆံရေးသည်ဖြစ်နိုင်ပွဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ တစ်ဦးလျှင်လူသည်စောင့်ရှောက်ပြုံးမှာရှာဖွေနေတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းအချိန်၊သူမြင်သူမနှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာတောင်မှသူသိတယ်၊သူမအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးတယောက်နှင့်အတူမိမိအသိအကျွမ်းဒီဆိုလိုသူအကြိုက်။ ဖြေ။ အဲပြားသောနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလူအပျော်နှင့်အတူလက်ထပ်။ မသင်လိုက်သည်။ သူကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်မလာ။ သင်၏နှစ်ခုအတိုက်အပေါင်းတို့သည်အချိန်ကျော်။ သူသည်မုသာစကားကိုသင်နှင့်သင်သိရ၊ဒါပေမယ့်သည့်အခါအကြိမ်ကောင်းသောခဲ့ကြ၊သူသည်ဘယ်တော့မှလိမ်။ သူဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပြီတစ်ဦးအမြှောင်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူရဲ့သောက်သုံးပိုပြီးစကားပြောဖို့သင်လျော့နည်း။ ဤသူအနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်ဥပမာ၊သင်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်။ ကံကောင်းပါစေဟုတ်လျှင်သင်၏ချမ်းသာသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊သင့်ရဲ့သူဌေး။ ထိုအခါရှိပါတယ်အားလုံးနေသောအမျိုးသမီးနှင့်အတူလျော့နည်းစိုးရိမ်ငွေသို့မဟုတ်အလေးချိန်၊ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ အဘို့အကြည့်ချင်း၊ဟာသ၊ထောက်လှမ်းရေး၊ကျင့်ဝတ်များ၊ပျော်စရာ၊နိုင်ငံရေး၊ရုပ်သံပြပွဲဦးစားပေးမှု၊တာဝန်၊လိင်ပုံများ၊နှင့်အလားအပုိင္းခွတော်ဘယ်ရီသို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်။ အဖြစ်သင်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားရှာဖွေနေအဘို့အကောင်းမိန်းကလေးများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊သင်တဦးတည်းကိုရှာဖွေအတွက်အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဘားတန်းနှင့်တည်ငြိမ်နှင့်အတူ။ ငါလိုက်ရှာသည်အမေရိကန်နိုင်ငံ(လူ)ကိုရချင်သူအများလက်ထပ်ပါရစေ၊မလိင်ရှာဖွေနေသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်ဆံရေး၊ဒါကြောင့်သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်ငါ့ကိုကူညီလိမ့်မည်အလွန်ကြီးစွာသော၊ကမ်းလှမ်းမှုကိုသင်ဒေါ်လာဟုတ်ပါတယ်သေချာနိုင်ပါတယ်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်အရစာအုပ်တစ်အုပ်အည့္ျခင္း(င)ဘိကပြောမည်သူထိုက်တန်ယောက်ျားလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအသင့်နေလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသို့သော်အမြဲတမ်းကိစ္စမဟုတ်။ အချို့သောအခြားရွေးချယ်စရာနိုင်ရာအရပ်ကိုယူ။ သင့်ရဲ့ချစ်သူရည်းစားနိုင်ဖြစ်စေဦးပြင်ဆင်ထားဒီအတွက်လာမယ့်အဆင့်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူချင်တယ်။ အပြားလည်းရှိပါတယ်အဘယ်သူသည်စုံတွဲများဖြစ်နိုင်ပါတယ်အတူတူနှစ်ပေါင်း၊အတူတကွနေထိုင်၊ကိုယ့်လက်ထပ်ပြီးစုံတွဲ၊မကျူးလွန်သည့်အတွက်အမှန်တကယ်အခမ်းအနား။ အဲ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းရင်းများစွာအဘို့ဤအပြုအမူ။ နောက်အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ချစ်သူရည်းစားမဖြစ်ဖြစ်သို့သင်အဖြစ်သင်စဉ်းစားပါ။ ဒီအစဉ်အမြဲအမှုမူကားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ။ ဤအမှုအရာဖြစ်ပျက်ကိုမပြုလုပ်သမျှသောအချိန်၊သို့သော်၊လျှင်သင်ကြည့်ရှုခက်လွန်းဒါဟာဖြစ်လာမှာဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ပြီးတော့အခါသင်အနည်းဆုံးကမျှော်လင့်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခြေအနေမှာများပြားလွန်းတဲ့လူတွေအတွက်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာသို့ရဖို့ကအချိန်ကြာပါလိမ့်မယ်နှင့်သူတို့အလွန်အမင်းပျော်။ ဆိုလိုကြောင်းသူတို့ပဲ’အခြေချ’ထိုသူတို့အဘို့အဘယ်သို့ရနိုင်။ ရှိသည်ဆိုလျှင်အလွန်ကြီးစွာသောမိတ်ဆွေများကိုသင်ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတူရှိသည်အလွန်ကြီးစွာသော၊သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးပျော်ရွှင်ကြောင်းအထက်၌နေသောလူတစ်ထောင်သို့မဟုတ်တစ်မှိုင်းတယ္။ သူ့ကိုပြောပြဖို့အကျော်ရရန်သို့မဟုတ်မည်သူ့ကိုပစ်ပြီးလျှင်သူကပြောပါတယ်ဒဏ်ငွေပဲကြကုန်အံ့၊သူ့ကိုသွား၊သူကထိုက်ပါဘူး။ ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်သင်ကြကုန်အံ့ချင်ကြဘူးသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဘာသာျပန္ခ်က္သိလာအောင်၊သူဘာကြိုက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူလိုပါဘူး။ တစ်ဦးမိတ်ဆွေကောင်း။ အခါသင်တို့ပတ်လည်၌နေသောလူမျိုးစကားပြောဖို့၊သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုပြသ၊နှင့်ရယ်သူ ဟာသ။ မကြောက်ကြ
ကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းများနှင့်အလုပ်လက်မဲ့၊ပိုပြီးအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများအဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်ငွေရတတ်သောရည်းစားနှင့်ဇနီး။ ကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီးများစွာမလိုအပ်ပါ။ သင်လျော်ဖြစ်ပြီး၊ကြော့နှင့်အသိဉာဏ်။ သင်ပင်လျှင်လှပရပ်အပ်ိဳေ၊သင်ခဲလှ၏တွေ့ဆုံရန်တစ်ကြွယ်ဝသောမိန်းကလေးတစ်ဦးနေ့စဉ်အသက်တာ၌။ ငွေရတတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသူတို့ရဲ့လှပတဲ့ဇိမ်ခံကားများ။ စစ်ဆေးခြင်း”ကားအလွျပင္ဆိုင္ေ”။ လူငယ်ကြွယ်ဝသောမိန်းကလေးများကဲ့သို့အချို့တောက်ပကျောက်ပေါ်။ အဟောင်းတွေအမျိုးသမီးများကြည့်ရှုလိုအမ္ဒဗလ်ဴ၊မာစီဒီးလွျနှင့်ကားဖက်ရှင်ရှိုး။ သူတို့ကြိုက်အက်ၤီရိုးရိုးကား။ ကိုယ့်ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်။ ဒါကြောင့်ဘာမျှမကုန်ကျ။ ကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီးများသိဖို့ဘယ်လိုပိုက်ဆံဖြုန်းအပျော်အပါးနှင့်အတူ။ ဖက်ရှင်ရှိုးများမှာ အရပါမည်ရှိသမျှအဘို့အအောင်မြင်ကြွယ်ဝသောမိန်းမတယောက်သည်၊ဘယ်မှာသူမကပြသနိုင်ပါသည်အများဆုံးသောဆင်မြန်းနှင့်စျေးကြီးထူးခြားလက်ဝတ်ရတနာ။ ဒီအဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးအချိန်တွေ့ဆုံရန်ဖို့တစ်ခုတည်းကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီး။ လျှင်သင်ပိုက်ဆံရှိသည်ဖို့လက်မှတ်မဝယ်၊ပတ်လည်မေးပါသို့မဟုတ်ကြိုးစားရှာတွေ့မှအခမဲ့လက္မွတ္အင်တာနက်ထဲမှာ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်အပျက်စီစဉ်သူများပေးသူတို့ကိုပယ်သွားများအတွက်အခမဲ့သို့မဟုတ်အလွန်အနည်းငယ်ပိုက်ဆံ။ အလှအပအလှပြင်ဆိုင်တစ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုဖြည့်ဆည်းရန်ချမ်းသာအမျိုးသမီး။ မနိုင်လျှင်သင်သည်တတ်နိုင်တစ်ဦးဆံပင်ညှပ်များ၏တဦးတည်းအတွက်သူတို့စျေးနေရာများရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားအချိန်ပိုင်းအလုပ်ရှိအုပ်ချုပ်သူအဖြစ်သို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ထမ်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖြစ်ရပ်များမှာအစဉ်အလာအကောင်းဆုံးနေရာများအတွက်အစည်းအဝေးကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီး။ သင်ကြည့်ရှုရန်ခေတ်မီဆန်းပြားနှင့်ချို။ ရိုးရှင်းစွာနှုတ်ဆက်ပြီးပူဇော်သွန်းလောင်း။ မည်ဖို့လုံလောက်တဲ့စကားစတင်။ နွေရာသီအားလပ်ရက်အချိန်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊စပိန်နှင့်အီတလီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကိုအထီးကျန်ကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီး။ သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်၊သူတို့ကိုနေရာတိုင်း-လေဆိပ်အတွက်၊အဖှဲ့အတွက်စျေးဝယ်ကုန်တိုက်၊စားသောက်ဆိုင်။ ပဲပိုမိုနီးစပ်လာနှင့်စတင် စကားပြောဆို။ သူတို့ကသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။ စျေးဝယ်တစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းနီးပါးအမျိုးသမီးနှင့်အထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝသော။ ဒူဘိုင်း၊ဟောင်ကောင်၊ပဲရစ်နဲ့လန်ဒန်မြို့အဓိကခရီးစဉ်ဒေသ။ ဘယ်လိုစတင်။ မေးသူတို့၏ကြွယ်ဝလှမိန်းကလေးများကိုရွေးချယ်ဖို့သင်ကူညီအကၤ်ီသင်တို့အဘို့အမေတ္တာရှင်အဖွား၊အဘယ်သူသည်အလွန်အဟောင်းနှင့်မခံစားမှုအကောင်း)လူမှုကွန်ယက်နှင့်အောင်သွယ်ပွဲစားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအတူအပြန်အလှန်၊အီတလီအခမဲ့ချိန်းတွေ့နှင့်အညီ-ကလပ်အတွက်အလွန်ထိရောက်စွာအစည်းအဝေးလူပျိုမိန်းကလေးများ။ စာမ်ားကပညာရှင်များအတွက်ပြည်ပမှာနေထိုင်။ အမျိုးသမီးရှိမကြွယ်ဝသောရှိပါတယ်၊သို့သော်အချို့အောင်မြင်သောအမျိုးသမီး။ အီတလီအခမဲ့ချိန်းတွေ့၏အပြည့်အဝငွေရတတ်သောသူကလူ၊ဒါပေမဲ့သူတို့အပေါင်းတို့သည်မဟုတ်။ သဟဇာတကလပ်ဖြစ်တဲ့အောင်သွယ်ပွဲစားဝက်ဘ်ဆိုက်အတြက္အာရှတစ်ဦးတစ်။ ဒါကြောင့်၊သင်ပြီးနောက်ဖြစ်ကြောင်းကြွယ်ဝသောအာရှမိန်းကလေးများ၊ဤတစ်ညာဘက်အရပ်မဟုတ်။ အားလုံးဤသူဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအခမဲ့။ ဧမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့သည်အခြားကြောက်မက်ဘွယ်အခွင့်အလမ်းကိုဖြည့်ဆည်းချမ်းသာတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီး။ သင်လိုအပ်သမျှအဖြစ်ချောမောနှင့်ရှိသည်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးကိုအလုပ်၊ မဟုတ်ရင်သင်ကြည့်ရှုမည်ဆင်းရဲမှနှိုင်းယှဉ်အခြားပြိုင်ဘက်။
အီတလီနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်အီတလီနိုင်ငံမှာတစ်ဦးတစ်ရောနှော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ရှာနေအီတလီနိုင်ငံအဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အနည်းငယ် အွန်လိုင်း ၊သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ထွက်သွားနှင့်အတူ။ စတင်စည်းအဝေးတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အီတလီနိုင်ငံတူယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့အွန်လိုင်းဦးခ်င္းနှင့်အခမဲ့အီတလီစကားပြော။ အီတလီနိုင်ငံ၏အပြည့်အဝတစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေရက္မ်ား၊မိတ်ဆွေတို့ကို၊အခင်မင်၊နှင့်ပျော်စရာ။ သူတို့ကိုရှာဖွေတာကလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူလုံးဝအခမဲ့အီတလီချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီနေ့ဖွင့်မှတ်ပုံတင်ကြည့်ရှုရန်အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများအတွက်ရရှိနိုင် တစ်ဦးတစ်ယောက်၊တက်ချိတ်အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းလုံးဝအခမဲ့အီတလီနိုင်ငံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ချိန်းတွေ့စတင်လာတဲ့အတွက်အီတလီ။ မင်္ဂလာပါမီး၊ငါ့နာမကို ၊ငါကွာရှင်းခဲ့ကြများအတွက်အတော်လေးအရေအတွက်ကိုယခုအနှစ်၊ငါသေချာဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုတော့မလေးဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်။ ငါသာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးတာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သားနဲ့သမီး။ မင်္ဂလာပါ။ ငါတီကစားဂိမ်းသို့မဟုတ်အဒရာမာ။ ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် ကဒ်၊ကျွန်မမမေးမေးလျှင်သင်ပိုက်ဆံများအတွက်၊ငါသည်တငါကပါ။ ကျွန်မမနေပေမယ့်လို့မရရှာတွေ့ဖို့အလေးအနက်။ ငါအရှက်အမျိုးအစားနှင့်အလွန်အကောင်းမြင်၊ကျနော်မလုပ်ကြပါဘူးအဘားသို့မဟုတ်ကလပ်အရာ၊ဒါကြောင့်ကျွန်မအထင်ဒီဟာအကောင်းဆုံးနေရာအဖြစ်အရမ်းရယ်ရတယ်၊ကျွန်တော်ရယ် ဒီနေရာဆောက်လုပ်ဖို့အကောင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောဆက်ဆံရေး၊ဒါပေမယ့်လည်းမဆန့်ကျင်အနည်းငယ်။
မီဤလောကသို့ငုပ်၏အိမ်ထောင်သည်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊သင်တို့ရရှိပါသည်သေချာအောင်သင်တင်ပါးမှအသုံးအများဆုံးလိမ်လည်၊ဒါကြောင့်သင်တက်အဆုံးသတ်ကြဘူးဆိုတော့ ။ ဝမ်းနည်းဖွယ်အချက်ကိုအကြောင်းအများစုဟာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကြော်ငြာရင့်ကျက်၊အမျိုးသမီးရေးရာရှာဖွေနေကြသည်လိမ်လည်။ တန်ချိန်ရှိပါတယ်သူတို့ကိုထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊နှင့်ပင်သပ္မႈမ်ားမလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်ထောင်မှတွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူတက်ချိတ်အခြားလက်ထပ်ပြီးအမျိုးသမီး။ သို့သော်၊ဤအဆင့်သည်ဒီဇိုင်းသူတို့အားကူညီဖို့အမျိုးသားများအကြောင်းကနေဖမ်းမိတဲ့။ ဘေးဖယ်ကနေလိမ်လည်၊သင်နောက်တစ်နေ့အကြီးမားဆုံးကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ဖမ်းမိတဲ့။ ပါရစေ သင်သည်ဤလုံးဝရှောင်အခြေအနေ၊ဒါပေမယ့်ကိုသာလျှင်သင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖို့လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကြောင်းသေချာစေရန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းထောင်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အမျိုးအစားပူရေးရာ၊သင်၏အိပ်မက်မက်သည်အမျိုးစုံလင်သင့်ရဲ့အစုစုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမျိုးစုံအိမ်ထောင်သည်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အားဖြင့်ပရိုဖိုင်းရှိခြင်းအပေါ်အများအပြားဆိုဒ်များကဲ့သို့:အက်ရှ ၊အထီးကျန်ဇလပ်နှင့်ရေးရာကလပ်၊မယ်သာနိုင် ဖန်တီးသောအခါတစ်ဦးအဘို့အိမ်ထောင်သည်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကိုအောက်မေ့သောရည်မှန်းချက်မဖြစ်ရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်မည်သည့်အမျိုးသမီး။ အဆိုပါဂိုးကိုဆွဲဆောင်ရန်ညာဘက်အမျိုးသမီး။ အသင်ထဲသို့ထားအားထုတ်မှု၏ဤအပိုင်းအဖြစ်တဦးတည်း၏တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးဆုံးအမှုအရာသငျသညျပွုနိုငျကြောင်းသေချာစေရန်ရှာနေသည့်အခါဖြည့်ဆည်းဖို့အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးသုံးထောင်သည်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊သင်တို့ချင်ကြပါဘူးဖြုန်းဖို့အချိန်အများကြီးနှင့်အတူနောက်ကျောနှင့်ထွက်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးများ။ သင်ရချင်တင်၊ကိုသတိရပါ။ ကတည်းကရည်မှန်းချက်မဟုတ်ဆောက်လုပ်ဖို့ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်အပေါ်မေတ္တာနှင့်အကျိုးစီးပွား၊အဆွဲအမှုအရာထဲကဤနည်းသည်အကုန်အစင်ချည်း။ သောအရာတို့ကိုတစ်ခုမှာအိမ်ထောင်သည်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်သာမဏေအဖန်ဖန်နားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးကြောင်းနိုင်ရန်အတွက်သေချာအောင်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းအဲ့၏ထိပ်မှာအမှိုက်၊ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်၊အကြောင်းပြုမှနိုင်ရန်အတွက်၊သငျသညျရှိသည်ဖို့တာပေါ့ပြုပါရန်အချို့သောအမှုအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂိမ်းအတွက်။ မဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ထောင်သည်အမျိုးသမီးရေးရာ၊ပထမဦးဆုံးသင်ရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့လုပ်၏တစ်ဦးထင်များအတွက်အွန်လိုင်းမှသူတို့ကိုချင်တယ် သင်တို့ကိုတွေ့မြင်လူတစ်ဦးအတွက်။ ဆိုရင်စိုးရိမ်ကြောင်းသင်ခဲ့ဖူးတဲ့ချောမွေ့နှင့်အတူအမျိုးသမီး၊သင်ဖြေလျော့နိုင်။ မျှမမှော်အရည်အသွေးအချို့ယောက်ျားတွေအပိုင်၊နှင့်ကင်းမဲ့။ ငါသွားပြီးနောက်တည်ထောင်ဖွင့်အသွယ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်သို့မဟုတ်ခြင္အေစာတိုပေးပို့၊သင့်ရဲ့အဓိကအာရုံစူးစိုက်သင့်ပါသည်ရတဲ့အပေါ်အမျိုးသမီး၏လိုက်လံအားပေးသူမဏန်းသို့မဟုတ် ။ ဤအတွက်အကြောင်းပြချက်ကရိုးရှင်းသည်:ကအဆောက်အစာရှောင်ခြင်း၏ခံစားချက်မျိူးယုံကြည်ကြသည်အများကြီးပိုခက်တည်ထောင်ရန်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်။ အနှေးနဲ့အမြန်ခံစားရလို့ချစ်စနိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအပေါ်ဆုံးရှုံးများအပြားယောက်ျားနှင့်ကျွမ်းကျင်ဒီအနုပညာပုံစံကိုသင်ဆယ်ကြိမ်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးတွေကိုထက်ပျမ်းမျှဂျိုး။ အနည်းငယ်နှင့်အတူအလေ့အကျင့်များ၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မာစတာ၏အခြေခံရောအတိုင်းအယူခံဝင်ဖို့အမျိုးသမီး၊သင်ပြုတစ်ချိန်က၊သူတို့အဖြစ်လိမ့်မယ်အားလုံးတစ်ခုနေ့စွဲနှင့်ပိတ်ပွဲသဘောတူညီချက်ကအဓိကဒီအလက်ထပ်ပြီးချိန်းတွေ့လမ်းညွှန်ဖြစ်။ အရာအားလုံးကိုလေ့လာသင်ယူပြီးပြီအတွက်ယခင်အကိုးအခန်းကြီးဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ၊သင်သည်ဤအချက်ဖို့။ ဒါကြောင့်၊သင်မှဆင်းသောဝါယာကြိုးအခုတော့၊နှင့်အရာခပ်သိမ်း ပတ္တာအပေါ်ဤနောက်ဆုံးအဆင့်ခြေလှမ်း။ အလေးအနက်မ။ လျှင်သင်ဆည်းပူးဒီအကွာအဝေး၊သင်ကလုပ်နေ
ဒီကုိယ္တုိင္လာေ ‘အမေရိကန်ကောင်လေးနှင့်တွေ့ဆုံအီတလီမိန်းကလေး’။ ဒီအီတလီသင်ခန်းစာအများအတွက်လူလိုသူကျော်အနိုင်ရသူမ၏နှလုံးနှင့်အတူအီတလီ။ ရှိမရှိသင်လိုက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် ။။ သို့မဟုတ်အီတလီနိုင်ငံ၊ဒီသင်ခန်းစာအရဝေးသင်ထင်ထက်။ ချို့သင်ယူနှလုံးပြည့်ဝစကားနှင့်အစာပိုဒ်တိုများအကြောင်းမှပြောနိုင်သင့်ရဲ့ရည်းစားအတွက်အီတလီ။ သို့မဟုတ်အချို့သင်ယူဖိတ်ခေါ်အီတလီစာပိုဒ်တိုများမှပြောနိုင်အီတလီမိန်းကလေးသင်ဖို့မျှော်လင့်ခြင်းအပေါ်တွေ့ဆုံရန်ရန်သင်၏ခရီး။ အခါရောမမွို့၌၊အမွားမ်ား။ ပရောပနှင့်အတူမင်းသမီးနှင့်နာတာရှည်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲအလွန်အမင်းရန်လိုသည်။ သင်သင်ယူပါလိမ့်မယ်လျှင်မေးရန်အလို့သူမကအတူသောက်မယ်ဆိုရင်၊သူမ၏နှင့်အတူမည်သူမဆိုလျှင်၊သူမကတစ်ဦးရည်းစားနှင့်အများကြီးပိုပြီး။ ကျော်နှင့်အတူအီတလီစကားနှင့်အစာပိုဒ်တိုများ၊လိမ့်မယ်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပေးစေခြင်းငှါသူမ၏အချို့အဓိကချီးမွမ်းသာအီတလီ(နိုင်လျှင်သင်သူမ၏အၿပံဳးကို၊ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ၊သငျသညျထက်ဝက်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးသား။) အောက်ပါသင်ခန်းစာအနေနဲ့အချက်အလက်အပိုင်းအတွက်ဗမာအကအားလုံးကိုငါပေးမည်ကိုထွင်းသင်လိုအပ်အနိုင်ရကျော်အီတလီအမျိုးသမီး။ သင်ခန်းစာအပြည့်အဝခန့်သည်။ မင္း။ ဒေါင်းလုပ်ယခုမှာ
ဤအခမဲ့အီတလီ သည်သာဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်၊ဒါကြောင့်ယခုပို့စ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြပါဘူးအတွက်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်။ အီတလီများမှာဘာသာရေးနှင့်ရင်ခုန်စရာတချိန်တည်းမှာပင်။ အများစုမှာအီတလီဖြစ်ကြောင်းရောမကက်သလစ်နှင့်ဗာတီကန်(ဌာနချုပ်၏ကက်သလစ်အသင်းတော်)အတွင်းအီတလီနိုင်ငံ။ ဒါကဘာသာရေးဘက်၊ဒါပေမယ့်သင်ကြားရကြပြီ ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တွေ့ဆုံရန်ပူအီတလီမိန်းကလေးများတော့အဆင့်သို့မြို့တော်ရောမ၊မီလန်၊နေပယ်လ်(ပဋိသန္ဓေနေရာ၏ပီဇာ)နှင့်များစွာသောပို။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူးလျှင်အနီးကပ်ရန်ထိုအခါထိုမြို့အဆင့်သို့အီတလီစကားပြောခန်းကိုဖြည့်ဆည်းပူအီတလီမိန်းကလေးများ။ မချစ်ကြဘူးလို့တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းခိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိဘများ၊ထို့နောက်ချိန်းတွေ့ကြပါဘူးအီတလီ။ ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့၏ကြွယ်ဝသောမိသားစုယဉ်ကျေးမှု၊အများအပြားတစ်ခုတည်းအီတလီအသက်ရှင်အိမ်မှာအထိအလှည့်အကြောင်းအနှစ်။
ခဲ့ပြီးပြီဆိုပါကတစ်ခုတည်းအနေဖြင့်အဘို့အရုံ မထင်နိုင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကောင်း၊တည်းနေသောယောက်ျားတွေသင့်ရဲ့အဆင့်တွင်၊သင်စဉ်းစားစေခြင်းငှါမှားတစ်ခုခုရှိနှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အကြောင်းသင်ရုံကိုရှာဖွေနေအားလုံးအတွက်အမှားအရပ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၊ကျွန်မအသုံးပြုယူဆရန်အကြောင်းရှိမှသာတစ်နေရာမှဖြည့်ဆည်းအကောင်အဘား။ ကိုယ့်ပုံကိုယ်ကိုယ်ထိုင် နှင့်အတူစားပွဲ၌စပျစ်ရည်ကိုတစ်ဖန်ခွက်၊နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရှာဖွေနေငြီးငွေ့၊အဆင်းအပေါ်ဒေါက်နှင့်လိုအပ်ချက်အတွက်အကောက်-ငါ့ကိုအ-ထဒါပေမယ့်လည်းအထက်တွင်ထူးဆန်းလုံလောက်တဲ့တစ်ဦးယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်မှငါ့ကိုရှာတွေ့။ ဒီအတိုင်းတော့၊ကျွန်တော်ထင်တာကလူတွေလိုပျံဝဲကျော်၊မှာစတင်က်ပ္၊လဲလှယ်ရေးနံပါတ်များနှင့်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်စဉ်အဆက်ပြီးနောက်။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊ကြောင်းအမျိုးအစားဇာတ်လမ်းလိုက္ဖတ္ေသာငါ၏ဦးခေါင်း၌။ ပါဘူးအမြဲအကောင်ကျော်တွင်အရက်ဆိုင်သူတို့ထိမိ၊နှင့်ရံဖန်ရံခါကျဆုံး။ ပေမယ့်လူတွေ့ဆုံရန်အတွက်အရက်ဆိုင်၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အောင်ထိမှန်နှင့်လွဲချော်။ သင်သည်အဖြစ်နိုင်ဘို့အထွက်သွားရှစ်စနေနေ့အပေါ်ပြန်တက်ပြီးတယောက်မျှမရှိ၊သို့မဟုတ်သင်ရနိုင်ကံပတ်ပတ်လည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအထီ၊အဖြစ်အနေနဲ့လွယ်ကူ၊ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းမှဖြည့်ဆည်းခွင့် ယောက်ျားတွေ၊သမ္မာ။ ဟုတ်၊အချိန်ကိုရောက်လာပြီများအတွက်သင်နောက်ဆုံးတွင်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမေးလျှင်သူတို့သိမည်သူမဆိုအတွက်စိတ်ဝင်စား၊နှင့်ဖြစ်င့်သူတစ်ဦးသင်၌စိတ်ဝင်စားပြန်တယ်။ ပေမယ့်သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားသုံးစွဲအချိန်အများကြီးရိုက်ကိုပယ်သင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေချင်သောသူအားသင်မိတ်ဆက်ပေးစမ်းသပ်ခြင်းကနေကိဳက္ဆံုးခံစားရတဲ့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါ၊သင်ယခုအချိန်သင်တို့အဘို့အမေးရန်’အဘယ်အရာကိုသူတို့ရရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချပြီးသင်၏မေတ္တာအသက်တာ၏လက်၌အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အရေးကြီးကြောင်းအမေးအချိန်မှာမိတ်ဆွေ။ မေးမြန်းသောသူတစ်စုံတစ်ဦးကသိတယ်သင်ထွက်အတွင်း၊သူနားလည်နိုင်စွမ်း။ ထို့အပြင်၊ယူကြည့်မှာသူတို့ရဲ့ရည်းစား။ သင်ရှာလိုလျှင်မိမိတို့ချစ်အေးနှင့်ဆွဲဆောင်မှု၊အဓိသူတို့ကရရှိပါသည်အလားတူအရသာအမျိုးသားများအတွက်။ ေခွေးလမ်းလျှောက်ဖို့အသင့်ဒေသခံပန်းခြံအလွန်ကြီးစွာသောလမ်းမှဖြည့်ဆည်းကြသူယောက်ျားတွေထွက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ခွေးကို။ ပင်အခါအတွက်တွစ်တာကိုကျင်းပ၎င်း၏ဆယ်မွေးနေ့နှင့်အဖွားအ အကောင့်ကိုလူနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသံသယအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ သူတို့ပြောတဲ့”မပါဘူး အလုပ်”၊”အမည်”၊”သင်လိုအပ်တွေ့ဆုံရန်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အမှန်တကယ်အသက်တာ။”မြောက်မြားစွာရှိပါတယ်အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များထွက်ရှိသောအိမ်မှထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာနဲ့ချီများအကျုံးဝင်နေသောအမျိုးသားများကိုယ့်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေနှင့်အတူထိတွေ့ရယူပါ။ သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အားဖြင့်မြို့၊အမျိုးအစား၊အသက်အရွယ်နဲ့တော့။ ပိုပိုပြီးအခုအစည်းအဝေးအွန်လိုင်း၊သင်တို့၏ပြည့်စုံသောယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အနည်းငယ်ပဲကလစ်နှိပ်လိုက်ကွယ်ပျောက်။ သင်ဘောလုံးအသင်းကြိုက်မပြုစေခြင်းငှါ၊ဒါပေမယ့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏စာသားအရှိပါသည်ယောက်ျားတွေမှာဘောလုံးဂိမ်းနဲ့ပဲလက်တဆုပ်စာ၏အမျိုးသမီး။ ဒါကကိုဆိုလိုတယ်အစားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းအစည်းအဝေးတစ်ခုဆွဲဆောင်မှု။ သဘာဝကျကျ၊သငျသညျဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တက်ကိုဖတ်အဆိုပါဂိမ်းအကြောင်းကြိုတင်နိုင်အောင်စတင်ပြီးကိုင်တစ်ဦးစကားလက်ဆုံနှင့်အတူဘောလုံးင္ပါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊သင်တို့ကိုမလိုချင်ကြဘူးအဖြစ်တိုတိုအခါသူတို့ကမေးပါသငျသညျအဘယ်သူသည်သင့်ရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်၊နှင့်သင်အဖြေ၊”အလ ။”ပဲဖြတ်မည်မဟုတ်၊ငါ့မိတ်ဆွေ။ သင်သည်မပြုလျှင်ဖန်ဘောလုံး၊အဘယ်ကြောင့်မကြိုးစားဘီ။ အပန္ဖိုလိမ့်မည်ထုပ်ပိုး၊နှင့်ရှိလိမ့်မည်ပါဘူး။ ခရစ်ကက်နောက်ထပ်ကောင်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှိတယ်ဆိုရင် ကွန်ရက်အဖြစ်အပျက်အတွက်အသင့်ဒေသခံဧရိယာတဝိုက်ဗဟိုပြု၊စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ဘဏ္ဍာရေး၊ဒါကြောင့်အပေါ်အဘယ်ကြောင့်မပေါ်လာပါတယ်တစ်လျှောက်တွေ့မြင်နိုင်သူတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်။ သင်သိဘယ်တော့မှမစေခြင်းငှါ၊၊သင်ဘးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရက်စွဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်လုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေညဥ့်ကျောင်းကိုသွားသို့မဟုတ်နေ့ကျောင်းလျှင်မူကားသင်တယ်အဆောင်နေအိမ်နှင့်အလုပ်အသက်စွန့်စားမှု၊ညကောလိပ်ကိုယ်စားပြုအဘယ္ဘက္မွတွေ့ဆုံရန်နေရာနဲ့တူ-စိတ်ပါဘူး။ သင်ပြုလိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်ကောက်တဲ့အကြောင်းအရာနှင့်သင်အတွက်စိတ်ဝင်စားပါပဲ၊အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းနှင့်သင်ကွာပါတယ်။ ပြီးမဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်သင်အသစ်လူ၊သင်အနည်းဆုံးရရန်ဆည်းပူးဖို့အသစ်ကျွမ်းကျင်မှု။ အနိုင်ရ။ သင်သိလျှင်တစ်ဂန္ထဝင်ကားပြပွဲသင်အနီးရှိလို့လုပ်တွေအများကြီးထက်ပိုဆိုးအလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်တလျှောက်ဘယ်အရာကိုမြင်မှအားလုံးနှင့်ပတ်သက်။ ပင်လျှင်ကားကြသည်မဟုတ်ကယ့်ကိုသင့်ရဲ့အရာဖြစ်ပါသည်၊သင်သိသင့်သောအကြောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အများကြီးထီးနိုင္မည္ျ-ဦးခေါင်းရှိလိမ့်မည်သူအသေခံဖို့အနိုင်နှင့်အတူအထင်သူတို့၏ရထားဘီးနှင့်အသိပညာအ။ သေချာတာပေါ့၊သင်စေခြင်းငှါရ သို့အကြောင်းကြားကြားထိုကဲ့သို့သော နှင့်ရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်း”အဖြစ်နောက်ဆုံး ခြောက်ဆယ်”နဲ့”အရှိန်သတ် မြင်းဏာ”၊သင်မူကားလည်းတွေ့ဆုံရန်အမှန်တကယ်က်ာက္တံုးေအဘယ်သူသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်မောင်းများစွာနှင့်အသစ်တစ်ခုရှာဖွေနေအမျိုးသမီး။ အဘယ်ကြောင့်။ သောကြောင့်သိပ္ပံ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာအလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ခုတည်းယောက်ျားအဘယ်သူမျှမနေပါစေဘာကိုသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကြသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏ကြားဖူးတယ်နှင့်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အနည်းငယ်မေးခွန်းတွေအကြောင်းရုပ်ပြ၊လူတွေယူလိမ့်မည်အကျိုးစီးပွားအတွက်။ ပေမယ့်၊သငျသညျကျိန်းသေသင့်ဘူးကိုပြောငှားရမ်းမန်နေဂျာသင်လိုချင်သည့်အပြောင်းအလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့”ကျွန်မလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသစ်တစ်ခုကိုယောက်ျားသည်”ပြောင်းလဲခြင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆက်ဆက်သင်စဉ်းစားသင့်တစ်ခုခုသင်ကမုန်းလျှင်သင်၏လက်ရှိအလုပ်နှင့်အားလုံးယောက်ျားတွေလည်းကောင်းငြီးငွေ့၊လိုက်တယ်သို့မဟုတ်လက်ထပ်။ အလုပ်ပြောင်းနိုင်ဆိုလိုအသစ်တစ်ခုသင်ပေးသည်သင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို၊နှင့်လည်းအခွင့်အလမ်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်။ ရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်အကိုင်များသင်ကြိုးစားနိုင်ပါ၊ဒါပေမယ့်အရေးကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာတစ်ခုခုပွဲ၏ကျွမ်းကျင်မှု-။ အိုေကည၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ကြီးမြတ်လမ်းရှိပါတယ်တွေ့ဆုံရန်ပါဘူး။ ပဲကပုံဖော်:သင်တို့ကိုင့်သဘောနှင့်အတူသူ့ကိုသင့်ရဲ့ é တု၊နှင့်ယခုသူသည်သင်လိုလား အပေါ်သူနှင့်အတူတက် ကျွန်တော်တို့မပိုင်။ အရာအားလံုး၏ဒီဆိုဒ်လုံးဝထူးခြားသောနှင့်မူပိုင်လျှင်၊သင်မျှဝေချင်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာ၊ထိုအရပ်ကိုတက်ကြွစွာအပြန်ချိတ်ဆက်။ အားလုံးသတင်းအချက်အပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကိုသယ်ဆောင်ကိုသာအဆိုတော်များနှင့်မ ။ ယခုမေး၏ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်၊အစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-ကုသမှု။ ကျွန်တော်အမြဲရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးတိကျမှန်ကန်အချက်အလက်ဒီမှာတတ်နိုင်သမျှ၊ဒါပေမယ့်သင်တို့အဘို့အတာဝန်ရှိသည်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်မဟုတ်များအတွက်တာဝန်ရှိကျင်းပခဲ့ကြောင်းဘာမှမဖြစ်ပျက်မှအသုံးပြုမှုသတင်းအချက်အလက်ဒီမှာ။
အရေအသိပညာပေးကြောင်းမဟုတ်အစဉ်အမြဲမင်္ဂလာရှိသောဆက်ဆံရေးအတွက်၊သင်မူကား၊မရဖူးလုပ္မယ္ပြည်ထောင်စုအဖို့အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေ။ သောသူတို့အဘို့အလုံလောက်တဲ့ကံကောင်းများမှာသစ်ရှာဖွေရန်ရင်ခုန်စရာအကျိုးစီးပွားတစ်ဦးပြီးနောက်အဆိပ်အတောက်ဆက်ဆံရေး၊ဒါဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့အတွေ့အကြုံ။ ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်သောအမှုအရာဖြစ်ပျက်ရန်မိန်းကလေးများတွေ့ဆုံရန်သောသူတော်ကောင်းတို့မှတဆင့်မသွားပြီးနောက်တစ်မကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကို။ လူတစ်ဦးသင်ကန်းယုံကြည်ကစားနှင့်အတူတစ်လမ်းအတွက်သင်ယခင်ကစဉ်းစားခဲ့မမြင်နိုင်။ ပြီးနောက်သင်၏ထွက်သောမှောင်မိုက်ဂူ၊သင်ဆဲမျိုးဖုံးအုပ်၏မျက်စိကို၊အသစ်အလင်းရဲ့ကိုယ့်နည်းနည်းလည်းတောက်တောက်။ နေသော်လည်းလမ်းအမှုအဆုံးသတ်၊သင်အတွေ့အကြုံတစ်စစ်မှန်သောအချစ်သည်၊သောကအများကြီးပိုပြီးထက်လူအများစုဘို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်၊တီလွန်းပေါ်မှာဆွဲထားမှုအရာကိုမတှေ့နိုငျလြှငျသူတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့။ ၎င်း့ရှာတွေ့မှရှားပါးသောအမှန်တကယ်အရာအတွက်တစ်ပင်လယ်၏အပြည့်အဝ ။ အထူးသဖြင့်ပြီးနောက်သင်ရုံထွက်ရတယ်တစ်ခုခုဒါကြောင့်ပြင်းထန်သော။ အခါတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်၊သင်အမွီအကြှနျုပျကိုအချိန်သင်လိုအပ်စဉ်းစားရန်အမှုအရာတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့။ ၎င်း၏မတူသင်သွားဖို့အပြည့်အဝပေါ်သို့တောနှင့်ရသေ့သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှတူ။ ပဲကူးဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌။ နေစဉ်သင့်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းရှိခဲ့ကြပေမည်အပျက်ဆက်ဆံရေးနောက်ဆုံးမှာ၊သင်ဖြစ်နိုင်ထက်ပိုသတိထားသင့်ကိုယ်ပိုင်ပးသည္။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်သွယ်ဖို့သင်၏လိုအပ်ချက်များလုံလောက်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ထားပါဖို့လိုအပ်။ လာမည့်အချိန်ဖြစ်ထက်ပိုပြီးအဆိုရှင်နှင့်ပတ်သက်။ ကတည်းကသင့်ရဲ့ယခင်ဆက်ဆံရေးကိုနီးပါးဖျက်ဆီးသင်တို့(အပေါ်အလေးပေးကိုအနီး)၊သင်ရုံပြုချင်သင်အနေဖြင့်အဘို့။ တခါကပါဘူးဖြစ်ပျက်၊ရုံကိုဖမ်းပြီးနွားဖြင့်အချို။ အပေါ်ရိုက်ခတ်သော ဘားသင်ဖြစ်ကောင်းအလွှာထွက်ပေါ်နမ်းသောအကြုံလေးစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည် ထက်ငယ်။ သင်တီကြးသူတို့ကိုဘာမှမ။ သာကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အပေါငျးတို့သပျော်စရာလွဲချော်ပေါ်ထွက်လာ၏။ ထိုအခါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း။ အဘယ်သူမျှမလုပ်နိုင်ရင်သင်တို့အဘို့အက ကိုသိသောကြောင့်သင်ရုံမှတဆင့်သွားလာ၏ငရဲ။ အတွက်အဆိပ်အတောက်ဆက်ဆံရေး၊အထူးသဖြင့်ထိန်းချုပ်သူများ၊သင်ဆည်းပူးကြအံ့သောငှါရန်အသုံးပြုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်မူလေနရာသင်၏အမှတ်ဖို့ပုံ။ (ဖြစ်နိုင်ကြောင့်ခဲ့။) အများစုဟာပုံမှန်လူ၊သော်လည်း။ သူတို့ကမကြိုက်ဘူး။ သူတို့ကလွယ်ကူယူနိုင်ပါသည်၊ဒါကြောင့်တီထင်သင့်ရဲ့အသစ်အလားအလာအချစ်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါဘူးတီ။ မြည်းလွတ်လပ်နေတယ်ဆိုတော့။ လက်ခံခြင်းကဲ့ရတဲ့လျစ်လျူရှု။ သူတို့လက်ထက်၌ကျော်ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့၊သင်၏အဌမအာရုံများ၏နည်းနည်းလေးနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုအဆိပ်အတောက်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သင့်တောက်တက်လျှင်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ပျက်။ အကောင်းဆုံးအရာပြုဖို့စက်တစ်စုံတစ်ဦးကအပေါ်အစောပိုင်းကအတွက်ဂိမ်းထက်သာ။ ထိုလမ်းသင်မယ်ဆိုတော့ရှောင်ရှားရန်ပူးတွဲပါ။ သေချာတာပေါ့၊မ့္မယ္တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦး၊ဒါပေမယ့်တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာသင်မယ်ဖြစ်ပြန်၏ခြေကိုအပေါ်။ မူမ်ား၊ကောင်း ။ ငါတို့သည်အရာရာ၌အကြားအနေနဲ့အမြင်၊တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ အရာအားလုံးကိုတွေ့ရသည်ရှုထောင့်၊အမအမှန်တရား။ ရှာဖွေရေးအတွက်အမှန်တရား၏။ လူများစွာရှုပ်ထွေးအတ္တနှင့်အတူမေတ္တာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကြောင့်မှပူးတွဲ တစ်စုံတစ်ဦးကိုအလွယ်တကူအထင်လွဲဖြစ်ကိုချစ်ရန်သင်ကွာရှင်းမှတဆင့်မသွားနဲ့အံ့သြလိမ့်မည်ဆိုပါကအစဉ်အမြဲခံစားနေရတယ်ကိုရပ်တန့်ဓာတ်၊ဒါအများအားဖြင့်လွှမ်းကြောင်းအရာအားလုံးအပေါ်သွား။ ပိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရွှေ့။ မေတ္တာသည်အများဆုံးရှာသောအခါ-ပြီးနောက်လူ့အတွေ့အကြုံ။ ဒါပေမယ့်အဆိုပါဝိရောဓိဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်၊ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ချစ်ကြသည်၊ကျွန်တော်အပေါ်သွားရှာအပြင်ဘက်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ ပိုပြီးပျော်ရွှင်မှုသည်တစ်စုံတစ်ခုသောအတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးသည်အလွန်အရေးချင်လျှင်သင်အသက်ရှင်ဖို့ပျော်ရွှင်ကျန်းမာဘဝ။ လိမခက်လွန်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်၊နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့မှအေးအေးဆေးဆေးသင်၏စိတ်နှင့်ငြိမ်ဝပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါ။ အစဉ်အဆက်ကတည်းကကျွန်မယောဂနှင့်တရားအားငါ၏တစျခုလုံးကိုအသက်တာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ငါခံစားရထွန်းလင်းဘယ်မှာငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌အဘယ်ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့ပြုလျှင်သင်အလွန်အရှက်နှင့် ။ မသိရပါဘူးဘယ်မှာရှာတွေ့မှတစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ အဖြေသိသာသည်:ဖြည့်ဆည်းမိန်းကလေးများအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ မည်သည့်ကောင်လေးအပေါ်ဒီဂြိုဟ်သည်အိပ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လှပသောမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်စတင်ချိန်းတွေ့နှင့်အတူ။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရသောတိုင်းတစ်ခုတည်းကောင်လေးကအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်၊ဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပစ္စုပ္ပန်ကွဲပြားခြားနားသောအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များ၏ကောက်-တက်ကျွမ်းကျင်သည်။ ကျွန်တော်အလောင်းအစားသင်အချိန်အများကြီးဖြုန်းအမျိုးမျိုးပေါ်လူမှုရေးကွန်ရက်များ၊ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုဒ်များနှင့်ပဲလှိုင်းသူတို့ကိုပေမယ့်၊သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်အကြိမ်တစ်ရာ။ ဘာမှမရှိဘူး။ ကိုယ့်တွေ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များစာရင်း၊ရွေးချယ်ဆိုက်သောအချစ်ဆုံးနှင့်စတင်က်ပ္။ သင်တဦးတည်းကိုရှာဖွေများ၏စာရင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း က၊ ကို၊တွစ်တာ၊စသည်တို့ကို။ အိုကေ၊သောအခါသင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီနှင့်အတူတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်လူမှုကွန်ယက်၊အချိန်ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်။ ဒီနေရာတွင်စုဝေးစေအချို့သောအကြံပေးချက်များများအတွက်အောင်မြင်သောစကားနှင့်သင်တန်း၏ရလဒ်ကောင်း။ စတင်ဖွင့်ကြကုန်အံ့။ အစဉ်အမြဲတင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများ။ သူတို့သည်သင့်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်မောင်ပြသသင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ သင်တို့ကိုလည်းမလိုအပ်ပါဘူးဖန်တီးရန်အယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူမိုက်မဲသောအမည်များ”၊ကျွန်တော်တို့အတွက်သဘာဝ”နှင့်တော့။ စေအနည်းငယ်အဓာတ္ပံုမ်ား၊ဒါပေမယ့်လုံလောက်တဲ့အအေးခံ။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချရေးဖို့သင့်ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ရယ်စရာဇာတ်လမ်းအတိတ်ထဲကနေ။ ဖဘီ။ အကြောင်းရေးသားအဖြစ်ကိုယ် ၊အကျဉ်းချုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ။ ဒါကပထမအချက်အလက်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်။ ကြိုးစားရသူမစိတ်ဝင်စားနှင့်ချိတ်ဆက်။ ရေးဖို့အနည်းငယ်တောက်ပရရင်တော့သူမကရှိပါတယ်သောအလိုဆန္ဒသင်မေးသောမေးခွန်းများနှင့်ဆက်လက်ေျပာပါတယ္။ မဟန်။ သင်ဆဲပါကချင်ဖို့ဘယ်လိုသိအပေါ်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်၊အဖြေကအလွန်ရိုးရှင်း:ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်။ အလွန်အနည်းဆုံး၊ဒါကြောင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရ။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးျဖဆိုေတြ၊ကစားရီစရာအခန်းကဏ္ဍနှင့်စေသာထာဝတင်းမာ။ ဒါကြောင့်၊သင်မည်ကဲ့သို့ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ် တတ်နိုင်သမျှအများအတွက်ယုံကြည်။ တခြားအဘယ်သို့ဘူးတဲ့မိန်းကလေးလိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကအရာမချော်မလဲရန်အ ။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခြင်းမဆိုလိုပါဘူးဖြစ်ခြင်းတူကြသည်နှင့်အတူသင့်မိဘများသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများ။ သတိရသင့်ရည်မှန်းချက်သည်အကျိုးစီးပွားကိုမိန်းကလေး၊နှင့်အခြားသွင်မိတ်ဆွေ။ ပင်လျှင်သင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ဆယ်မိန်းကလေးများတချိန်တည်းမှာပင်၊အသီးအသီးတို့ကိုသင့်ဖြစ်ခံစားရလျှင်သင်တဦးတည်းရှိသည်။ ထိုသူတို့အသီးအသီးရှိသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်၊သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာ၊ကိုယ်ပိုင်အသက်တာ၏သွားရာလမ်း။ ထိုသို့အကြောင်းကြောင်းဖြင့်ချဉ်းကပ်မှု၏အသီးအသီးတို့ကိုကြည့်ရှုရပါမည်ကဲ့သို့သောအထူးတ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြသရန်နှင့်အစိတ်ကူးစိတ်သန်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအာရုံစိုက်သလိုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းပြသနိုင်ဖို့သူမ၏အကျိုးစီးပွားဆက်ဆံရေးအတွက်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့အကြံပြုချက်သင်ကူညီလိမ့်မည်ရောက်ရှိဖို့ကောင်းတစ်ဦးရလဒ်အတွက်စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူ၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနေ့သင်တွေ့လိမ့်မည်သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။
ကျော်သန်းပေါင်းများစွာ၏တဦးခ်င္းအဘို့ရှာကြသည်အပေါ်ပြီးပြည့်စုံသော-လိုင်းအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်ဖို့ပျော်စရာရှိသည်၊ရော၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊လိင်သို့မဟုတ်ရေရှည်အရွယ်ရောက်တယ္။ ဘယျသို့အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်၊ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုရှာကြသည်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပိတ်မျဉ်းနှင့်အတူအခြားအဖွဲ့ဝင်များ၏ဤအခမဲ့အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့လိုင်းအေဂျင်စီများအတွက်စစ်မှန်သောအသက်ကိုအတွေ့အကြုံ။ ဝင်ရောက်၍အခမဲ့ချိန်းတွေ့များအတွက်စံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်၊သင်မည်သေချာပါစေမည်မဟုတ်လိုအပ်သည်သင့်ရဲ့အကြွေးကဒ်အဖြစ်အခမဲ့အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ သင်အရွယ်ရောက်ပြီးသဘာဝကျကျသင်ကုသခံရဖို့ချင်တယ်အရွယ်ရောက်အဖြစ်။ ဒါကြောင့်၊သင်သာအရည်အရွယ်ရောက်ပြီးတစ်ဦးတစ်ယောက်၊အဘယ်သူသည်အလွန်အယုတ်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝ။ ကိုယ်ပိုင်အသေးစိတ်ပရိုဖိုင်းသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့၊ပျော်စရာနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော။ ချိန်းတွေ့လိုင်းမရှိခဲ့ဖူးသောအလှန်အမှီ။ အီတလီအခမဲ့ချိန်းတွေ့အဖွဲ့အရွယ်ရောက်ပြီး ချိန်းတွေ့၊အရွယ်ရောက်ပြီးဝဘ်က်ပ္၊အခမဲ့အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများနှင့်အခြားသူများ။ အမွတ္ဆင္ဆာကတည်းက၊ဒီနေရာမှာလူတိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီး။ တစ်ခုလုံးခရီးကိုအတူစတင်သည်၊သင်သာဆုံးဖြတ်သည့်အကြောင်းအရာရွေးချယ်ဖို့အဘို့အတဲ့ဆွေးနွေးချက်နှင့်အတူအခြားအဖွဲ့ဝင်များ။ ဒီအရာဟာအရွယ်ရောက်အၾကင္ယာချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ဒါကြောင့်သင်ထိအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးၡမ်ားနှင့်အဆင်သင့်ရသေးသေးအနက်ရောင်စာအုပ်တို့အဘို့သင်ကြိုက်အများဆုံး။ သင်အားဖြင့်ကန့်သတ်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းသာ။ ဖန်တီးမှုဖြစ်၊အပြန်အလှန်နှင့်တီထွင်ဆွဲဆောင်ဖို့ပိုပြီးအာရုံစိုက်ရာမှအရွယ်ရောက်ၡမ်ားပေပ်ာက္ေ။ သင်ရှက်တတ်ဖြစ်ကြသည်ဆိုရင်အပြောအပေါ်အချို့သောအကြောင်းအရာအတွက်စကားပြောခန်း၊သငျသညျရှေးခယျြနိုငျအထူးရွေးချယ်စရာများ၏ပုဂ္ဂလိကစကားပြောခန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပျော်မွေ့၏ဆက်သွယ်ရေးနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကလေထုထဲတွင်အ။ စာရင်း၏မိတ်ဆွေများရှာဖွေဖို့သင်ကူညီသင့်ရဲ့အသစ်တွင်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးရင်း။ ပူးပေါင်း၍အခမဲ့ချိန်းတွေ့လုံးဝအခမဲ့များအတွက်ယနေ့အချိန်တွင်နှင့်တီစောင့်ဆိုင်းအခြားအဖွဲ့ဝင်များမှဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်၊သင်တက်ကြွတဲ့ဖြစ်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ယနေ့စတင်အနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရွယ်ရောက်ပြီးအတွေ့အကြုံ။
အီတလီအမျိုးသမီးတွေဟာလှသည်၊သူတို့ပြင်း၊မီးတောက်နေကြသည်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကအခြားအမျိုးသမီး။ ကျွန်တော်သိသည်အတွေ့အကြုံကနေ၊ငါအသက်ရှင်ရန်အဘို့အနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲ၊ကျွန်မချိန်းတွေ့ခဲ့သည်အမျိုးသမီးအတွက်အီတလီနိုင်ငံအဘို့တပြင်လုံးကိုအချိန်။ ကျွန်တော်အဘယ်အနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲကခဲ့သည်။ ငါတူခံစားနိုင်ရေးတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအပေါ်ရက်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဆန်း၊ဆန်းကြယ်နှင့်ပျော်စရာ။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့စတင်သူများအတွက်၊ငါအကြောင်းကိုပြောပြအီတလီတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးနှင့်ချိန်းတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို။ သူတို့က၊သင်တန်း၏၊အံ့သြဖွယ်မိခင်။ ဆုံးနဲ့အရေး၊အီတလီနိုင်ငံ၊အမျိုးသမီးဓါတ်ပုံများပျော်မွေ့။ မည်မျှငြီးငွေ့၏မိဘများငါမြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ ? ငြီးငွေ့ကိုသာကနေနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကနေပေမယ့်လည်း။။။။။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသည်။ ကလေးတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အားလပ်ရက်များ၊လူမ်ိဳးအားလုံးဆွေမျိုးသားချင်း။ သူတို့ကအလွန်ဖက်ရှင်။ အထူးသဖြင့်သာ။ အထူးသဖြင့်မီလန်အတွက်။ သူတို့ဆီမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်စံသတ်မှတ်ချက်အဘို့အဖက်ရှင်စွမ်းရည်-အသီးအသီးအမျိုးအစားအဝတ်အစား၏ဖြစ်ရမည်အချို့သောအမှတ်တံဆိပ်အခြို့သောအရောင်။ သူတို့မကြိုက်လွန်းတောက်ပတဲ့တန်ချိန်သော်လည်း။ မည်သည့်အဘို့၊အီတလီ၊ထိုမိသားစုသည်အရာအားလုံးကို။ ၎င်း၏ဖန္တီးခဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ရှေးပဝေကတည်းက၊နှင့်ယခုကအပိုကြေးအမြတ်အစွန်းအဖြစ်မိသားစုနှင့်အတူ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်သားသမီးအီတလီမိသားစုခဲ့သည်။ ယခု၎င်း့ပိုမိုနီးကပ်ဖို့ဥရောပစံချိန်စံညွှန်း။ သို့သျောလညျးသူတို့နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမေတ္တာနှင့်ကြောင်းကိုအသည်းအသန်မိမိတို့အနီးကပ်။ ခုံယောက်ျားနှင့်အများပြည်သူအတွက်တားမြစ်ထားသည်။ မိန်းမတို့အဘို့၊ဒီနေဆဲစဉ်းစားမကောင်းတဲ့လေသံ။ နှင့်အားလုံးအတြက္လည္းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း။ တံခါးပိတ်။ လူအပေါင်းတို့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမြင်ကွင်းတွေပေါ်တွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်အလမ္းကို-ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဟာကစား(သူတို့မွေးဖွားမင်းသ)။ ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း၊တစ်ဦးအမေရိကန်အလျောက်ရှိပါတယ်၊အချို့အကြားခြားနားချက်များအမျိုးသမီးအတွက်အမေရိကန်နှင့်အမျိုးသမီးအတွက်အီတလီနိုင်ငံ၊နှင့်ဒီမှာ ရုံ၏အချို့။ ရတဲ့သူမရဲ့ဖုန်း:အတူတစ်ဦးအမေရိကန်မိန်းကလေး၊ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသည်အရေအတွက်ဆိုရင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနှင့်အတူ။ ဒါဟာအတော်လေးခက်ခဲသည့်အခါသင်ချိန်းတွေ့နေသောအမျိုးသမီးအတွက်အီတလီနိုင်ငံ၊သင်မယ်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ ထွက်:အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိကြောင်းအမေရိကန်မိန်းကလေးလိမ့်မည်သင်ဖိတ်ခေါ်။ အီတလီမိန်းကလေးမည်မဟုတ်၊နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ သင်ယူကြပါ။ ကျက်:အမေရိကန်မိန်းကလေးအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်ဒီအလမ်းအတွက်၊သူမတီသည်းခံရှိ။ သို့သျောလညျးအီတလီမိန်းကလေးများချင်ဘယ်လောက်ဝေးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဘို့အသွား။ ဖြတ်ကပိုပြီးအသုံးများအတွက်အမေရိကန်မိန်းကလေးအဘို့အဆပ်ဖို့သူ့ကိုယ်သူ။ သို့သျောလညျးအီတလီမိန်းကလေးမည်မဟုတ်၊အနည်းဆုံးအချိန်အတန်ကြာ(အနည်းငယ်ပထမဦးဆုံးရက်စွဲများ)။ ပရော:အတာပိုမိုလွယ်ကူသည်ပရောနှင့်အတူတစ်ဦးအမေရိကန်မိန်းကလေး။ ဤရွေ့ကားမိန်းကလေးများအဖြစ်တော်တော်များများတိုက်ရိုက်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အီတလီမှမိန်းကလေးများ။ အို၊သင်အတော်လေးကောင်းတယ်၊အလွန်ကောင်းမှာရောအရအီတလီမိန်းကလေးစိတ်ဝင်စား။ ဘယ်အီတလီအလှကြည့်။ သူမ၏မျက်နှာရပါမည် ၊ဘဲဥပုံသဏ္ဌာန်၊နှင့်အတူထင်ရှား လိမ္း။ လုံး၊၊အညိုရောင်မျက်လုံးများနှင့်ကျယ်ပြန့်သော၊ကောင်းစွာ-ဆောင်ဖို့အနက်ရောင်မျက်ခုံး။ ပိုပြီးသစ္စာတောင်းဆိုရန်ဖန်ဆင်းလျက်ရှိနှာခေါင်း၊ရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှာခေါင်းတွင်အီတလီသည်။ ဤလှပသောဘဲဥကရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်မှောင်မိုက်အထူဆံပင်ကောက်ကောက်၏လြယ္အိတ္-အရှည်၊ဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ပဲပေါ့ပေါ့ဆံထုံး။ အီတလီကိုသဘောပေါက်နားလည်သဘောသဘာကိုပေါ်နှင့်ရိုးရှင်းများ၏ပုံရိပ်ကို။ အဖြစ်များအတွက်မိတ်ကပ်လျှင်၊အီတလီအမျိုးသမီးတွေကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မိတ်ကပ်၊ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးအရာသူမပွုပါမညျသည်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဤကိစ်စတှငျ၊တောင်ပိုင်းအမျိုးသမီးများအထူးသဖြင့်ကံကောင်း:သူတို့ရဲ့ ငျအထူအနက်ရောင်မျက်။ များသောအားဖြင့်သူတို့နေဆဲအနည်းငယ်ရာင္းသူတူထုတ္ကုန္ပ။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပုံသဏ္ဌာန်မှာအီတလီမိန်းကလေးများနိုင်မှာဖော်ပြထားတဦးတည်းစကားလုံး:သှေး။ ၏လက်ထက်မှစရှေးဟောင်းရောမမြို့၊ဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့သည်-တွင်ကျွန်းဆွယ်သူတို့မကြိုက်ဘူးပါးလွှာ။ နေသားတကျပုံသဏ္ဌန်၏ရှေးဟောင်းရုပ်ပွားတော်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများအ ပတ္တူစအမြဲလိုအပ်အရာတစ်ခုခုကိုပိုမိုသန့်စင်ပြီးထက်ခန္ဓာကိုယ်အနှိပ်နှင့်အတူအစားအစာ။ အီတလီအမှန်တကယ်လေးမြတ်တန်ဖိုးကမာၻ၊ ဒါပုံစံဖြစ်သင့်လျော်သော:အသံထွက်ရင်သား၊ခါးနဲ့တင်ပါးမပါဘဲ၊ပိုခေါက်။ အဆိုပါရင်သားများအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးအစစ်များ၏ရင်သားများ ဖက္ရွင္က်ျနှင့်နိုင်ငံခြား ။ ဖြစ်ကောင်းအရေးအပါဆုံးအရာဖို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်ဖြစ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်၊တဦးတည်းနှင့်သာ။ အီတလီနိုင်ငံ၊အမျိုးသမီးကဲ့သို့စတိုင်ယောက်ျားတွေရှိသည်သောအဓိပ္ပာယ်၏ဖက်ရှင်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်ဘယ်လိုသိ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်၊အကြောင်းပြောပြပါဘယ်တော့မှအနိုင်ငံရေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော။ စည်းကမ်းအဖြစ်၊သူတို့ကိုမုန်း။ အီတလီအမျိုးသမီးနှင့်တူယောက်ျားတွေကြောင်းသိရန်အဘယ်အကြောင်းပြောဆိုသည်အဘယ်သင့်လျော်သောအသေးများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရာအားလုံးနှင့်ပတ်သက်။ ကြင်နာဖြစ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်သူမ၏မိခင်၊အီတလီလူတန်ဖိုးအနက်အဓိပ္ပာယ်နောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမေအတော်လေးတွေအများကြီး။ စစ်မှန်မှု၊ယုံကြည်မှု၊စတိုင်၊အနေဒါတွေဟာအရေးအပါဆုံးအရာကအီတလီအမျိုးသမီးကဲ့သို့သောအမျိုးသားများအတွက်၊နိုင်ငံခြား။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်ဖို့တစ်ဘုံကုမ္ပဏီ၏မိတ်ဆွေများ၊သို့မဟုတ်၊ဖြစ်ကောင်း၊ဆွေမျိုးသားချင်းများ။ ဖြစ်ဖို့သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ကုမ္ပဏီအသူမ၏နှင့်ပြသရန်မေတ္တာနှင့်ရိုသေလေးစားမှုကိုသင့်ဘုံငယ္ခ်င္း တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ မကြောက်ပါနဲ့ချဉ်းကပ်၏တဦးတည်းတစ်ဘားမှာသို့မဟုတ်ပင်လမ်းပေါ်မှာသူတို့အတော်လေးပွင့်လင်းစိတ်ထားကိုထိုကဲ့သို့သောကျွမ်း၊၊စည်းကမ်းအဖြစ်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်မည်သည့်ပြဿနာနှင့်အတူစကားပြောတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း။ ပြီးလျှင်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်စစ်မှန်သောအသက်ကိုရွေးစရာတခုမဟုတ်ပါဘူး၊ထိုအခါသိကြောင်းအတော်လေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအတွက်ဖန်ဆင်းချိန်းတွေ့အီတလီအမျိုးသမီး။ ဖွင့်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းချိန်းတွေ့၏တဦးတည်းအီတလီအတစ်ဦးတစ်ယောက်သည်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးများသိမှရအီတလီမိန်းကလေးသင်ကြိုက်အတွင်းသင့်ရဲ့အစည်းအဝေးနှင့်အတူမိတ်ဆွေကောင်း။ ကိုဖြည့်ဆည်းရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများ၏အဆိုပါမိန်းကလေး၊တဖြည်းဖြည်းရရှိပြီးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်။ ဤပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်အ၏နှလုံးရဲ့ရည်းစား။ လျှင်သင်၏အကူအညီ၊မိတ္ေဆြမ်ားကိုစမ်းနေ့စွဲအပေါ်သူမ၏။ လျှင်သင်ကံကောင်းများမှာ၊ဒါကြောင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ကန့်သတ်တစ်ခုမှာအစည်းအဝေး။ သူမ၏ဆက်ဆံနှင့်အတူအသောက်အဖြစ်အဘို့အဆပ်ဖို့အသောက်။ သို့သော်လျှင်ယခုကြုံတွေ့နေရမဟုတ်အကောင်းဆုံးအကြိမ်များဝေါဟာရများအတွက်ဘဏ္ဍာရေး၊အလုပ်မဟုတ်ရင်။ လျှင်သင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူလှပသောအီတလီ အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးလွန်လျှင်မြန်စွာ၊အဘို့အလုပ်ရှုပ်အကျွမ်းနှင့်အတူသူမ၏မိဘများ။ အများစုမှာအီတလီအကောင်လေးတွေဟာအထူးသဖြင့်မသန်ကြောင်းစကားပြောဆိုသောအခါညစာအတူ၎င်းတို့၏မိဘများ။ ငါသေချာဖြစ်ကြောင်းကိုအကြောင်းကိစ္စအများစုအတွက်သူတို့မိသားစုညစာစားအဖြစ်အန္တရာယ်အဖြစ်အီတလီဆိုကြသည်။ အများဆုံးဖွယ်ရှိ၊စုံတွဲတစ်တွဲကော့တေးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်အတွက်သင်ဘားတန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့အနာဂတ်ဖခင်-ယောက္ခ။ ဘယ်တော့မှအစဉ်အဆက်အောက်တွင်၊မည်သည့်အခြေအနေသင့်မလေးသူမ၏မိသားစုဝင်။ ဤအမှု၌၊သင်လွန်းမဖြစ်သင့်ပါဘူး၊မဟုတ်ရင်သင်ပျင်းစရာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုမှုသင်တို့၏သဘောအဟာသက။ လျှင်သင်တွေ့ဆုံအီတလီအီတလီနိုင်ငံ၊စဉ်းစားအကြားခြားနားချက်။ နီးပါးတိုင်း၏ဒေသတွင်းအီတလီနိုင်ငံရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းနှင့်ယုံကြည်ချက်။ အဖြစ်အထွေထွေလမ်းညွှန်၊ လေ့ပိုမိုသတိထားထက်သူတို့ရဲ့တောက်ပတောင်ပိုင်း။ အရသာ၏ဤလူလည်းကွဲပြားခြားနားသောအဟောင်းများကိုပိုနှစ်သက်ပင်လယ်နှင့်အလင်းဟင်းနေစဉ်၊ ကြိုက်တတ်တဲ့အသားနှင့်ခ်ာင္းဝက်အူချောင်း။ ရှိပါတယ်နေစဉ်၊ပိုပြီးယောက်ျားအတွက်အီတလီနိုင်ငံထက်အမျိုးသမီးများ၊ရှိပါတယ်နေဆဲအတော်လေးအနည်းငယ်…
ငါအနက်ရောင်ဖရိကဧည့္ခန္းဖရိကအီတလီနိုင်ငံနှင့်နည်းပညာအလုပ်နေ့တိုင်းမှလွဲသာကြာသပတေးနေ့သို့မဟုတ်ရှည်လျားတနေ့လို့ကျန်ကိုယ်လမ်းဖြင့်သာသူမ၏ငါ့အလိုရှိသမျှမိသားစုဖရိကအတွက်နည်းပညာနှင့်အတူနေထိုင်နေငါ့သူငယ်ချင်းတွေ ပါတိုယောက်ျားနောက်ကျောလေးပါ မိုင္၊အင္ဂ်င္နီယာ၊တစ်ခုတည်းကိုဘယ်တော့မှထောင်၊မေတ္တာ၊ဂီတကခုန်အတူအစည်းအဝေးရမ်လူ။ အနက်ရောင်ကောင်လေး၏အသုံးမယ်လို့ငါအသားအရေငါ၏ဆံပင်ကြောင့်ငါ၏အမျက်ခုံးအလွန်မှေး၊ငါရိုင်းသောရင်ဘတ်အမွေးပေါ်မှာငါ့ရင်ဘတ်ကျွန်တော်ကသာမန်အလုပ်သမားငါငါ့မိသားစုငါအီတလီအသက်အနှစ်၊အလပ်မရှိ၊သားသမီး၊အရပ်ရှည်ရှည်၊အလုပ်အတွက်အီတလီရထားလမ်း။ ရှာဖွေနေအဘို့အကောင်းတစ်မိန်းကလေးတစ်သူမကလိုလားမိသားစု၊ သူမကတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ယောက်ျားအနားမှာသူမ၏စဉ်းစားသူအဖြစ်ကယ်လီအမည်အားဖြင့်ငါချစ်ဂီတဘောလုံးခရီးသွားလာချစ်ဖို့လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြောင်းကိုရယ်စရာအကောင်လေးနှင့်အတူဖြစ်၊ငါချစ်ငါကအလွယ်တကူအချစ်လိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ကြှနျုပျကိုထိခိုက်နောက်တဖန်အငယ္ဆံုးအတွက်ဖြစ်ရပြီနှင့်အ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခင်မင်ရင်းနှီးသူတစ်ဦးနဲ့ကျွန်မဟာသအလွန်ကောင်းစွာငါမုန်းမုပါမြီးချောကလက်အားဖြင့်အရေပြားပါးလွှာအနက်ရောင်ဆံပင်အပေါင်းတို့၏အရောင်အဝတ်ကိုအဘို့အရှာနေပါကြောင်းတစ်ဆက်ဆံရေးအမြဲစေဖို့ကျွန်မကိုပျော်ရွှင်စေနှင့်ကောင်းသောအပြုအမူလူတစ်ဦး
အခမဲ့အင်တာနေရှင်နယ်ချက်တင် အခန်းပေါင်းများအတွက်ဧည့်စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အတက်လက်မှတ်ထိုး။ ဖန်တီး၊ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပူးပေါင်းအုပ်စုချက်တင်အခန်းပေါင်းအီတလီအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းတစ်နေရာမှဖြည့်ဆည်းစိမ်းအီတလီနိုင်ငံမှ။ လည်း၊ဒါကြောင့်တစ်နေရာမျှဝေဖို့သင့်လမ်းကိုနားလည်မှု၊ကမ္ဘာ၏။ ဒါဟာနေရာအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့အသင့်အကြိုက်ဆုံးအရာ၊သိလောကအကြောင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် ။ အစိမ်းသင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ မျှဝေသင့်ရဲ့ကြောက်နှင့်အတူစိမ်းအဖြစ်၊ဒါကြောင့်အလွယ်ကူဆုံးအလုပ်တခုကိုဟောပြောဖို့ရှေ့တွင်အစိမ်း။ နှင့်အတူစကားပြောစိမ်းသင်ကူညီနိုင်၊ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအသက်တာ၏အဖြစ်၊ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘယ်တော့မှသင်အဘို့အဖြေရှိသည်နိုင်ပြီဟုလျှောက်ခြင်းအားဖြင့်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရှိပြီးသား။ ။ အတွက်အခမဲ့ အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မိတ်ဆွေတို့ကိုကြိုက်သူကျပန်းစကားပြောမပါဘဲ။ အခမဲ့အသုံးျပဳ မပါဘဲမည်သည့်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အတက်လက်မှတ်ထိုး။ လစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံမှစတင်က်ပ္။ က်ာ္လြန္ရသည်အေးမြသောနေရာကိုဖြည့်ဆည်းရန်မှာလူကြုံနှင့်အဖော်မပါဘဲ။ က်ာ္လြန္ရအရေအတွက်ရှိပါတယ်အခမဲ့ကျပန်း ဖြည့်ဆည်းဖို့အေးမြ အသစ်မှလူများကမ္ဘာအဝှမ်း။ ပုဂ္ဂလိကတို့တွင်အခြေခံအကျဆုံးအင်္ဂါရပ်များ ။ ဒီအကြုံအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းအကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့။ အမွတ္စွဲချက်လျှောက်ထားက်ပ္။ ချက်တင်နှင့်အတူမရှိဘဲကျပန်းတပါးအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး၊အပုဂ္ဂလိကပြောဆိုချက်တင်၊ဗီဒီယို၊ဓာတ်ပုံတွေအခမဲ့။ ချိတ်ဆက်ဖို့လူများကမ္ဘာအနှံ့မှအပေါင်းတို့နှင့်ဤဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်ကျပန်းစိမ်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ။ က်ာ္လြန္ရအလြဲေဝက်ဘ်ဆိုက်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဝင်ရောက်ဖို့အကြုံအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းဝန်ဆောင်မှုမပါဘဲမွတ္ပံုမပဲခွင့်ပြုနှင့်အတူစကားပြောမှကျပန်းတပါးအမျိုးသားသည်ဒါပေမယ့်လည်းအခမဲ့သင်မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ ရတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းကျပန်းတပါးအမျိုးသားထံမှအက်စ်၊တက်၊အာရှ၊သြစတြေးလျနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ စကားပြောနှင့်အတူစိမ်းအလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့၊စကားပြောအသစ်နှင့်အတူလူအတွက်စကားပြောခန်းသင်ကူညီနိုင်ပါတိုးတက်မှုနှင့်ဆင်၏အကြံပြုချက်များနှင့်အဖိုးတန်အခွင့်ထူးကြသောအခါသင်တို့ကိုမလိုအပ်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတွင်သို့မဟုတ်တက်လက်မှတ်ထိုး။ စတင်စကားပြောမှာဒီချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု သင်ရုံရှိရွေးချယ်ဖို့အသင့်တော်သောအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စတင်က်ပ္။ အပိုင္းေတြမွာအားလုံးအစီအစဉ်များ၏အောင်မြင်မှာစကားလက်ဆုံက်ာ္လြန္ရချက်တင်အခန်းပေါင်း။ မှာက်ာ္လြန္ရအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊သင်မျှဝေနိုင်ပါသည်၊ဓာတ်ပုံတွေ၊ဗီဒီယို၊ချက်ချင်းသို့စကားပြော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကဝန်ဆောင်မှု၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏သင်တို့အတွက်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကအခန်းတစ်ခန်း။ စတင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာမှာက်ာ္လြန္ရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါနှင့်အတူအကောင်းဆုံးက်ပ္အတွေ့အကြုံ။ အောက်ပါအင်္ဂါရပ်မျှခြင်းရဲ့ချက်တင်အခန်းပေါင်း။ ကျနော်တို့ဝန်ခံ၏တန်ဖိုးကိုအချိန်နဲ့ကယ်ဖို့အချိန်နှင့်ယင်းအစားသင့်ကိုကူညီသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းအတွက်စကားပြောနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊အရာ၌ခန့်ထားပြီသေချာသင်ကွုံတှေ့ရ။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှတ်ပုံတင်ဆိုလိုသည်မှာအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်သည်စကားပြောကိုအွန်လိုင်းမှာပါ။ အနှိပ်သည်သင်၏မှော်တံခါးကိုနှင့်အတူစကားပြောကျပန်းတပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှ။ သင်ကရန်မလိုအပ်မှတ်ပုံတင်ရန်မည်သည့်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ က်ပ္အွန်လိုင်းနိုင်ခဲ့ဖူးဘူးဒီလွယ်ကူသည်။ များစွာသောအကြိမ်ဘယ်အရာကိုအများဆုံးအမေရိကန်အနှံ့လာသည် ပေက္ခာဝက်ဘ်ဆိုက်၊ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်နိုင်ပါသည်အများကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်ရှာဖို့ရှိနေဖို့အတွက်အချိန်ကြာကြာကာလများ။ အများဆုံးအွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုဒ်များနဲ့သင့်စမတ်ဖုန်း၊သင်ဟန်း။ အသစ်နှင့်အတူနည်းပညာနှင့်အကူအညီ၏ဂူယခုဖြစ်နိုင်ဆောက်လုပ်ဖို့အပြည့်အဝတုံ့ပြန်မှုဝဘ်ဆိုဒ်မယ်လို့ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးအပေါ်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်အကွန်ပျူတာ၊စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်။ တစ်ခုခုကိုအအန္းဖုန်းသို့မဟုတ် သို့မဟုတ်တောင်မှဆေးပြား၊မခွဲခြားဘဲစက်ကိရိယာအမျိုးအစားအသယ်ျ ဟနှင့်အတူလူအမျိုးမျိုး၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနဲ့။ မဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုအက္ပ္ကိုအသုံးပွုဖို့အခမဲ့ချက်တင်န်ဆောင်မှု၊မည်သည့်မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ချိရာက္ဇာကိုအလွယ်တကူလိုက်နာနှင့်အတူချက်တင်ဆိုက်ရဲ့ယန္တရား။ ရအားအခမဲ့အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊ဆုံသစ်စိမ်း၊စကားပြောအသစ်အစိမ်းနှင့်အသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေ။ ကျွန်တော်တွေ့မှချစ်ကြတဲ့လူတွေနဲ့မတူဘဲ။ ဒါဟာတစ်ဦးပျော်စရာအတွေ့အကြုံအကြောင်းသင်ယူရန်အသစ်၊လူသစ်နှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှု။ တစ်နေရာဖြည့်ဆည်းနိုင်တက်သစ်စိမ်းနှင့်အတူ-စိတ်တူ ဖြစ်ပါတယ်။။။။။ စကားပြောနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏နှင့်အသုံးပြုသူများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှ၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများသို့မဟုတ်တောင်မှသင့်ဒေသခံသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ။ ယောင်သမျှသောပျော်စရာရှိသည်နိုင်အောင်သစ်မိတ်ဆွေများအတွက်၊အကောင်းဆုံးချက်တင်ဆိုဒ်များအစိမ်း ။ ကျနော်တို့မေတ္တာပို့၊အဘယ်သူသည်မ။ ကျနော်တို့နာရီကုန်ပို့တနေ့လုံး၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနည်းငြီးငွေ့ဖို့ပဲတနေ့လုံး။ မှာက်ာ္လြန္ရသင်မျှဝေနိုင်ပါသည်၊ပုံရိပ်တွေနှင့်ဗီဒီယိုစကားပြောနေစဉ်နှင့်အတူတစ်ဦးကလူစိမ်းနှင့်အတူစကားပြောကျပန်းအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ဒါဟာပင်အတွက်လိုအပ်သောမည်သည့်အသုံးပြုသူတွေကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ပေးပို့ဖို့ဓာတ်ပုံတွေသို့မဟုတ်ဗီဒီအွန်လိုင်းစကားပြောခန်း။ ဒီအွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့များအတွက်အပေါင်းတို့ဧည့်သည်များ။ စကားေျယခုစတင်ဝေမျှရုပ်ပုံနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုနှင့်အတူအသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ချက်တင်အိမ်ထောင်ဖက်။ မပေးရန်လိုအပ်သည်ကမဆိုတစ်ပြားမှဒီအွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြောဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းအခမဲ့မခွဲခြားဘဲဘယ်တိုင်းပြည်မှဖြစ်ကြသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့ဖြစ်ရမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ တွေ့ဆုံစကားပြောဖို့အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများ။ တွေ့ဆုံဆယ်ကျော်သက် ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအစဉ်စကားပြောကိုအွန်လိုင်းမှာအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရသင့်ရဲ့ပျင်းနှင့်ဓာတ်သက်ပါ။ အခမဲ့အများပြည်သူစကားပြောခန်းအခန်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ သို့သော်ထိုအုပ်စုချက်တင်မဟုတ်ပါဘူးအစဉ်အမြဲအဆုံးသတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုကောင်းစွာ။ က်ာ္လြန္ရဖို့ခွင့်ပြုချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏ပုဂ္ဂလိကအတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကိုသုံးနိုင်သည်ပုဂ္ဂလိကစာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုကိုပင်သိ၏ချက်တင်မိတ်ဖက်ပင်ပိုကောင်း။ အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးအနည်းငယ်လိုအပ်ချုပ်ကဲ့သို့ကောင်းစွာနှင့်ပုဂ္ဂလိကစာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုရုံတာဝန်ထမ်းဆောင်သော။ ဘေးဖယ်ကနေအသုံးပြုပြီးအွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုရှိမယ့်ကျနော်တို့စောင့်ရမည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲမှာနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ချဉ်းကပ်မည်သည့်အစိမ်းနဲ့၊ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းသင့်အတတ်နိုင်ဆုံးမဖြစ်သင့်ကြိုးစားခြောက်လှဖို့မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို၊ငါတို့သည်သင်တို့အသင့်ရှိနေဆဲစကားလုံးများ၊ယဉ်ကျေးတဲ့အခြေခံအဘို့အရှည်လျား-တည်မြဲအွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးမျိုး။ ပြည်သူ့အချစ်က်ပ္မှာကျပန်းချက်တင်ဆိုဒ်များအဲဒီအလမ်းကြောင်းသစ်ကိုယနေ့။ ကျနော်တို့ချစ်ဖို့ပြောင်းရွှေ့ထံမှတစ်ချက်တင်ဆိုက်မှအခြားပြီးမှကပ်မပါပဲ။ သူလူမျိုးအဘို့မေတ္တာလွှင့်မှအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းမှအခြားဖို့တောင်းခံရ မှတ်ပုံတင်နိုင်မယ့်အလွန်နာကျင်သည်။ မှာက်ာ္လြန္ရသင်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ က်ာ္လြန္ရကမ်းလှမ်းသင်သည်အခမဲ့ဧည့်စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုငျသောသက်သေပြခံရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီများအတွက် မုိ။ ချိန်းတွေ့နှင့်ရှာဖွေသင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ဘယ်တော့မှမနိုင်ဒါဟာလွယ်ကူ၊ကိုယ့်တဦးတည်းကိုနှိပ်ပါစတင်စကားပြောမပါဘဲ။ နေထိုင်မှုအတွက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးကလွယ်ကူသည်မဟုတ်များအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်ဖို့စိတ်ကျရောဂါ၊တင်းမာမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကို။ ချက်တင်အခန်းပေါင်းအပေါ်အခြားတစ်ဖက်သွင်ဒါပေမယ့်သက်သေပြခံရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီနေထိုင်ကြသူများသည်တစ်ကူကယ်ရာမဲ့ဘဝ။ ဖြစ်စေသင်ကဆယ်ကျော်သက်၊အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးများ၊အမျိုးသားများထံမှသို့မဟုတ်မည်သည့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၊ချက်တင်အခန်းပေါင်းခဲ့ကြလိမ့်မယ်အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးနေရာအနာရောဂါကိုငြိမ်းသင်နှင့်သင်၏အချိန်၊အရည်အသွေးအချိန်။ သိရန်ရတဲ့လူသစ်နှင့်ဝေမျှသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုအလွန်လွယ်ကူသည့်အွန်လိုင်းစကားပြောခန်း။ ဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်မဲ့ပေးတော်မူသောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြောတာဘာမှအတွင်းတည်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်၊စတင်စကားပြောသူစိမ်းတွေနဲ့အတူအခုလို၊သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ် အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ကျနော်တို့ချစ်စိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အရောင်စုံ။ အတွက်စကားပြောခန်းနိုင်၏ကြီးမြတ်ပျော်စရာအခါပျင်းပို့တနေ့လုံး။ နှင့်အတူအထူးအခွင့်တင်ပုံရိပ်တွေနှင့်ဗီဒီယိုျချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြု၊သင်တင်ရန်အသင့်ကိုယ်ပိုင်စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်ပရိုဖိုင်ရုပ်ပုံကိုဆွဲဆောင်အသစ် ၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်ဟုတ်ပါတယ်။ အုပ်စုချက်တင်အခန်းပေါင်းနှင့်အတူစက်ဝိုင်းကိုအမြဲပျော်စရာအခါသင်တန်းသားများတွေ့မြင်နိုင်သည်သင့်ရဲ့အသစ်ဖြင့်ကြည့်သင့်ပရိုဖိုင်ရုပ်ပုံအသစ်။…
လူတို့တွင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအနှံ့ကနေကမ္ဘာကိုလေ့လာစူးစမ်းအသီးအသီးအခြား၏ယဉ်ကျေးမှု၊နှင့်အတူလူကိုရှာဖွေအကျိုးစီးပွားအလားတူနှင့်စကားပြောဆိုထိုသူတို့နှင့်အတူအားလုံးနေ့နှင့်ည။ ဒီလိမ့်မည်မသာအများကြီးပျော်စရာပေမယ့်လည်းတစ်ဦးသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံသင့်အဘို့အ။ ဝဘ်ဆိုဒ်အကောင်းတစ်ဦးပလက်ဖောင်းတိုးမြှင့်ဖို့၏လူမှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ထံမှသင်ယူ၏။ ဒီမှာလည်းရှာဖွေစူးစမ်း၏။ အိမ်စာမျက်နှာ၏အဝက်ဘ်ဆိုက်ကမ်းလှမ်းဖယ္ရွားဖို့ရိုးရိုးစကားေျမ။ သင်တို့သို့သာရှိသည် ဖြည့်စွက်အသေးစားပုံစံနှင့်သင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်အလိုအလျှောက်။ ပလက်ဖောင်းကအလွန်ဘေးကင်းလုံခြုံစေသည်အကြားရေပန်းစားလူအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်အုပ်စုများ။ သင်လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်သင်သိပြီးသားနှင့်လည်းအစီဝက်ဘ်ဆိုက်၏သေချာသောအမျှတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်မျှဝေပေးဘးယင်း၏အသုံးပြုသူများမှကာကွယ်လ။ ဒါကြောင့်အရေးအဖတ်သူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစတင်ခင်မှာအလုပ်သင်အခမဲ့စူးစမ်းဖို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်၊ကလွယ်ကူမယ့်၊အကူးအပြောင်းမှချက်တင်အခန်းကိုအခြား။ အီတလီစကားပြောဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းစိတ်တွင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၏လူအပေါင်းတို့သည်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကို။ ရှိပါတယ်ပြုံးသင်သုံးနိုင်သည်အတွက်၏စကားလက်ဆုံအခြားသူများနှင့်အတူ၊စတင်တဲ့ဒီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဆိုက်၏အတုံ့ပြန်ရန်အသံုးျပဳသူမ်ား၏မေးမြန်းချက်များအလျင်အမြန်နှင့်သေချာသောအသွားအလာဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရွေ့လျားမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့ပျက်ကျခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကောင်း။ အီတလီစကားပြောတတ်သင်ရွေးချယ်မှုရှိသည်ဖို့မျိုးစုံဆိုင်ချက်တင်သို့မဟုတ်တဦးတည်းအပေါ်တစ်ဦးစကားပြောနိုင်သောနေရာထား၏။ တချိန်တည်းမှာပင်တစ်ချိန်ကသင်ထားခဲ့၏သမိုင်း သင့်စကားပြောလိုက်ဖျက်ရာ၏။ သင်သည်လည်းသုံးနိုင်သည်အတွက်ဒီဝန်ဆောင်မှုသင့်ရဲ့အိုင်ပက်ဒ်၊ ကို၊အန္းမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်။ ပြဿနာကိုကဘာလဲ၊ဂိုဏ်း? သင်ကြော်ငြာသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဆိုက်၏အတုံ့ပြန်ရန်အသံုးျပဳသူမ်ား၏မေးမြန်းချက်များအလျင်အမြန်နှင့်သေချာသောအသွားအလာဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရွေ့လျားမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့ပျက်ကျခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကောင်း၊ထိုအသေးဆိုက်ပျက်ကျဆက်မပြတ်။ ငါသဘောပေါက်နားလည်ကြောင်း၎င်း၏အမွီအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊သို့သော်ဤသည်အထပ်တလဲလဲ။ ကျနော်တို့ဘာလုပ်နိုင်ဖို့အကူအညီ? ရွေးချယ်စရာတွေကို။ကုမၸ။သာမလုပ်ပဲမည်သည့်အသင်းနှင့်အတူ အခြားရွေးချယ်စရာ၊ဖစ္သျ အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေရန်အပေါင်းတို့သည်အသက်ရှင်သောချက်တင်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဆိုဒ်များတစ်နေရာတည်းတွင်။
ပြီးပြီဆိုရင်တွေ့တဲ့မိန်းကလေးသင်အမှန်တကယ်ကြိုက်၊ရတဲ့သူမရဲ့ဖုန်းအရေအတွက်အရေးပါသည့်အသေးစိတ်ညစ်စရာအလုပ်တခုကို။ သင်ရုံကြောခံစားရ၊ဒါပေမယ့်ဒီအဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးတစ်ရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်။ ရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြေမိန်းကလေးရဲ့ဖုန်းအရေအတွက်ဟာရိုးရိုးကျက်သရေသူမ၏အားဖြင့်စေ့စေ့စကားလက်ဆုံနှင့်အမေးများအတွက်သူမ၏ဏန်း၊ နေစဉ်ရှောင်ရှားနည်းတူဖြားသူမသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့။ တည်းခိုနေဖြင့်တည်ငြိမ်အေးဆေးနှင့်စိတ်ချယုံကြည်၊သင်ဖွယ်ရှိကောင်းတစ်ဦးအထင်။ တစ်ဦးဝီကီအလားတူအပြောင်းအလဲ၊ဆိုလိုတာကအများအပြားအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုရေးသားနေကြသည်စွယ်စုံကျမ်း? ဖန်တီးရန်ဤဆောင်းပါးသည်၊လူအချို့အမည်မသိ၊အလုပ်လုပ်ဖို့အပြင်နှင့်အချိန်ကျော်။ ဤဆောင်းပါးအစအရှု၊အကြိမ်။ ပြီးပြီဆိုရင်တွေ့တဲ့မိန်းကလေးသင်အမှန်တကယ်ကြိုက်၊ရတဲ့သူမရဲ့ဖုန်းအရေအတွက်အရေးပါသည့်အသေးစိတ်ညစ်စရာအလုပ်တခုကို။ သင်ရုံကြောခံစားရ၊ဒါပေမယ့်ဒီအဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးတစ်ရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်။ ရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြေမိန်းကလေးရဲ့ဖုန်းအရေအတွက်ဟာရိုးရိုးကျက်သရေသူမ၏အားဖြင့်စေ့စေ့စကားလက်ဆုံနှင့်အမေးများအတွက်သူမ၏ဏန်းတိုက်ရိုက်နေစဉ်၊ရှောင်ရှားနည်းတူဖြားသူမသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့။ တည်းခိုနေဖြင့်တည်ငြိမ်အေးဆေးနှင့်စိတ်ချယုံကြည်၊သင်ဖွယ်ရှိကောင်းတစ်ဦးအထင်။ သင်လိုအပ်အနားယူရှေ့တော်၌ပင်မိန်းကလေးသို့ချဉ်းကပ်။ ကိုသိရရင်တောင်သင်ရချင်သူမ၏အရေအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ပွဲချင်းပြီး၊သင်မည်မဟုတ် နိုင်စေဖို့ထိုသို့ပြုမပြုလျှင်သင်ချမ်းတုန်ထဲကပထမဦးဆုံး။ သူမနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျပါတယ်လျှင်သင်ရုံကြောင့်မှတစ်မိုင်အကွာလျှင်သင်ရုံကြောင့်၊သူသည်လည်းဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်သို့မဟုတ်သင်တွှေသူမ၏ချွတ်။ သော်လည်းဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်အာရုံကြောဆိုရင်ခံစားချက်သို့မဟုတ်ရှက်ကြောက်၊မိန်းကလေးအတွေးမိပေမည်၊အရာကိုအဘယ်သို့ရဲ့အတက်နှင့်အတူဤလေး။’ သူမထင်စေခြင်းငှါရှိပါတယ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့ကြောင်းကိုပယ်ပင်လျှင်သင်အနေနဲ့သာမန်အမှုအ ။ အေးဆေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်အဆိုးဆုံးအခြေအနေ။ အဆိုးဆုံးအရာဖြစ်ပျက်နိုင်သည်ဤဖြစ်ပါသည်:သငျသညျအဘို့အမေးပါသူမ၏ဖုန်းနံပါတ်၊သူမမည်မဟုတ်ပေး။ သင်ရှင်သန်နိုင်ပါကြောင်း။ ဖြစ်နိုင်။ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ ချင့်ချိန်တက်လာဖို့အကြီနှင့်အရှိန်အ။ စေမျက်လုံးချင်း၊ပြုံးနှင့်သွားတက်ပြသနိုင်ဖို့သူမနှင့်သူမ၏အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသောကောင်လေး။။။။။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်စောင့်ရှောက်ဖို့သူမ၏စကားပြောခြင်း၊သင်ရှိသည်စေဖို့အလွန်ကြီးစွာသောပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်အဖြစ်လျင်မြန်စွာသင်သည်တတ်နိုင်။ ဒီမှာကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်:စိတ်ချယုံကြည်။ ကြောင်းသူမ၏ပြပါသင်တို့ကိုချစ်သောသူသင်၊သငျသညျအတူပျော်ရွှင်ဆိုရင်အသင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါ၊နှင့်သင်ချစ်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံ။ သူမထင်ကောင်းကိုခံစားရကြောင်းသင်၌နေသောသူ၊သူမပါလိမ့်မယ်အကြောင်းအကောင်းခံစားမိပါတယ္။ အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်၊သူမစိတ်လှုပ်ရှားသည့်အခါထွက်တွေ့သင်၌စိတ်ဝင်စားကြ၊သူမ၏သူမ၏အားလုံးသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို၏။ ဒီအမဆိုလိုပါဘူးကြောင်းသင်ပေးသင့် ကြည့်သူမ၏မျက်စိကိုသို့။ ဒါဟာသင့်ကြောင်းဆိုလိုလှည့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာသို့သူမ၏၊သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပယ်ရှားပြီး၊သူမ၏မြင်သောအရာကိုသူမကေျပာလိမ့္မည္။ ပြီးတာနဲ့သင်အခြေခံအချက်များရလမ်းအထွက်၊တူ၏အမည်များနှင့်အဘယ်မှာသင်တာမှ၊သင်စတင်သင့်တယ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့မိန်းကလေးတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်း။ ဒီအမဆိုလိုပါဘူးကြောင်းသင်မေးသင့်ကြောင်းသူမ၏ဘဝဒဿသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုအများဆုံးအဓိပ္ပါယ်တွေ့အကြုံကသူမ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ၊ဒါပေမဲ့ဒါဟာသင့်ကြောင်းဆိုလိုရွှေ့အတိတ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒီမှာကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုဖွင့်:သူမေးမြန်းသောမေးခွန်းအချို့နှင့်ပတ်သက်။ မတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုမေးမြန်း၊သူမမောင်နှမ၊အကြောင်းရုပ်ရှင်သူမရဲ့အမြင်မှာ၊သို့မဟုတ်အဘယျသို့ထင်သည်သူမ၏အလုပ်။ စေကြောင်းတွေ့မြင်သင်ဂရုစိုက်ကြောင်းသူမ၏ထင်မြင်ယူဆချက်။ ဖွင့်။ သေချာအောင်သင်သည်နှစ်ခုစလုံးအကြောင်းပြောနေတာပမာဏအတူတူ။ မ တင်ချင်ပေါ်ဖိအားဖြင့်သူမ၏မေးတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးမရှိဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းတစုံတခုကိုကိုယ်အကြောင်းကို၊သင်မူကား၊မပြုသင့်ဝက်အစကားလက်ဆုံဖြစ်စေ။ မာရ်နတ်။။။။ ပြီးတာနဲ့ဆောက်လုပ်ကောင်းတစ်ဦးဆက်ဆံရေးရှိရန်စတင်ရွှတ်လုပ်ပျော်စရာ၏နည်းနည်း။ သူမဝတ်ထားသည့်သိသာထင်ရှားစွာအလှဆင်ထုိးရွှေလည်ဆွဲ၊ကိုင်နှင့်ပြောသောသိ။’ သူမ၏ချီးမွမ်း။ မပြောဘူးသူမသူမ၏အလှဆုံးအမျိုးသမီးအစဉ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရုံသူမ၏ပြောပြပါ၊သူမကရှိပါတယ်အနေနဲ့အံ့သြဖွယ်ရယ်၊သူမ၏မျက်စိနေကြတယ်ဗျာ။ တန်ဆာမလိုက်မသွားဘူး။ သေချာအောင်နေထိုင်ရန်အေးမြ။ ပြီးပြီပြီးတာနဲ့သင်ပြောင်းရွှေ့အတိတ်မိတ်ဆက်နှင့်သဘောရှိသည်သူမ၏အစပိုင်းတွင်၊ဒါကြောင့်အချိန်မှသူမ၏ရဖို့ရန်လိုသင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့လိုသူမ၏နှင့်အတူနောက်တဖန်အ။ သူမမစဉ်းစားရန်ရှိသည်င့်သောယောက်ျားသည်သူမ၏အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြအားလုံးသူမ၏အသက်လုံးရှိပါတယ်စဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်၊’ဟေ့၊ဒီအကောင်လေးသည်အေးမြ။ ငါ၏ပိုချင်တယ်။’ ဒီနေရာမှာမည်သို့ရဲ့သူမ၏ရချင်မှနောက်တဖန်သင်တို့မြင်ရဖို့:-သတ္တိ ။ သူမ၏ပြသသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမာရ်နတ်မှ၊သူမရှိသည်သူမ၏အကျီ၊နှင့်တက်စောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့အဆုံး၏တစ်ဦးချွန်ထက်သော စကားပြောဆို။ သူမေရယ်စရာ၊အဖြေနှင့်အတူနောက်ကျောတစ်ဦးရယ်စရာ စားပဲရယ်နှင့်၊’ရယ်စရာကောင်းလိုက်တာ။’ ဒီအကြောင်းသူမ၏ပြပါလိမ့်မယ်သင်တက်စောင့်ရှောက်လျှင်သင်သူမ၏နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား။ ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်အနည်းငယ်ပို။ မရကြဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစေသူမ၏စိတ်မသက်မသာဒါပေမယ့်ပြောပြသူမ၏စေသည်ရာတစ်ခုခုသည်သူမ၏နှလုံးအရည်ပျော်ပဲနည်းနည်းနှင့်မြင်ရမယ့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုအားလုံးဟာသ၊ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်ပြုပါပြီအပျော့ဘေးထွက်ဆိုး။ သူမသင်ဖို့လမ်းဖွင့်။ ပိန်အတွက်အနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာနှင့်အားပေးသူမအကြောင်းတစ်ခုခုပြောပြရန်မိမိကိုယ်ကိုအကြောင်းသူမကပြောပြမပဲ။။။။။ စတင်ဆောက်အအုံတစ်ခိုင်ကွန်နက်ရှင်။ ဤအသင်သည်မှန်ကန်စွာပြုလျှင်။ တစ်ခုခုမှအစအဦးထံမှသင့်ရဲ့စကားလက်ဆုံတက်လာနောက်တဖန်အ၊သင်အထင်ကြီးသူမတွေကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အားဖြင့်အကြောင်းသင်မှတ်မိရာသူမကပြောပါတယ်။ မစောင့်ပါနဲ့အမှုအရာသည်ရန်နောက်ကျခြင်း၊သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။ ရုံဖွင့်တဲ့အခါသင်အများဆုံးပျော်စရာပြောနေတာအခါ၊သို့မဟုတ်ခင်ဗျားရယ်အခက်ခဲဆုံး၊အတိအကျအခါသင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ သင်ရောက်ရှိသည့်အခါရှိရာအမှတ် သင်ထင်၊’ငါရှိခြင်းထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ကိုပြောနေတာကဒီမိန်းကလေးကစိတ်မပင်ချင်မှကြားဖြတ်အားဖြင့်မေးသည်သူမ၏ဖုန်းနံပါတ်၊’သင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်၊နှင့်ချက်ချင်း။ ဒီနေရာမှာနှစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံးဤအမှုကိုနည်းလမ်းများ:သူမ၏ထွက်မေး။ အစားအမေးများအတွက်သူမ၏ဖုန်းနံပါတ်၊သူမ၏ထွက်မေးနေ့စွဲအပေါ်။ အလယ်၌ကြီးစွာသောစကားလက်ဆုံပြောလိုက်တာပဲငါရှိသည်သွားဖို့၊ဒါပေမယ့်ငါတကယ်လိုချင်တဲ့အတက်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီပြောဆိုကျော်ညစာစားပွဲသို့မဟုတ်အချိုရည်နောက်ရက်သတ္တပတ်။ လိုပါကြောင်း။’ သူမေျပာလိုနှင့်ဤအချက်မှာ၊သူမကထို့နောက်သင်မေးသင့်မေးသည်သူမ၏အရေအသုိက္အ။ မေးသည်သူမ၏အရေအတွက်ကို။ ကိုယ့်သည့်အခါစကားပြောဆိုမယ့်အဖြစ်နိုင်၊ပွောဆို၊ကာဟေး၊ကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာပါ။ ငါသည်ငါ၏အရေအတွက်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့စောင့်နိုင်။’? ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ပေးနေတာပါကြောင်းကိုသင်မေးသည်သူမ၏အရေသောကြောင့်သင်ထွက်ဆွဲထားချင်တယ်၊နောက်တဖန်မကြောင့်သင်တို့ကိုပို့ချင်သူမထိတ်လန့်ကျမ်းသို့မဟုတ်ကြောင့်အလုအယက်ကနေရတဲ့မိန်းကလေးများ’ဖုန္းနံပါတ္မ်ား။ သင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်။ မစိုးရိမ်နှင့်စုပ်သင်သည်သင်၏လက်သီးအတွက်ဆို၊’ဟုတ္တယ္။’ အခါသင်ပေးသည်နှင့်သူမ၏အရေအတွက်ကို။ ပြောပြီး’မိုက်၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊နှင့်ပြောပြသူမသင်သူမ၏ကိုပဌနာ။ ထို့နောက်နှုတ်ဆက်နှင့်လမ်းလျှောက်အတူချွတ်၏ဦးခေါင်းသည်မြင့်မားသောကျင်းပခဲ့သည်။ နှင့်သူမအဘယ်သူမျှမကပြောပါတယ်လျှင်၊ပင္ပံုကချွတ်နဲ့ပြောမယ့်ပြဿနာကကြီးမှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ လျှင်သင်အစက်အပြောက်အနေနဲ့လုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေး၊သို့မဟုတ်ပဲတစ်ဦးကမိန်းကလေးကြည့်တော့ချစ်စရာသို့မဟုတ်အချိုချင်ကြောင်းကိုသင်သူမ၏သိရန်ပိုကောင်း၊ပြီးတော့မထိခိုက်ဖို့အလျင်အမြန်မေးသည်သူမ၏အရေအတွက်ကို။ ဒီလိုလုပ်ဖို့နှစ်မိနစ်အတွက်၊သင်လုပ်ရရှိသည်ခပ်သိမ်းသောဒုတိယရေတွက်။ ပထမဦးဆုံးသေချာအောင်သူမသည်လက်ခံ။ သူမကအမိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်ရည်းစားနှင့်အတူ၊အတွက်စေ့စပ်နက်ရှိုင်းတဲ့စကားပြောဆိုသို့မဟုတ်အတူသူမ၏ရှာဖွေနေတစ်စုံတစ်ဦးက။ လမ်းလျှောက်တက်ရန်မိန်းကလေးကဲ့သို့သင်တို့တစ်မစ်ရှင်အပေါ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊သင်။ မျက်နှာသို့လှည့်နှင့်သူမ၏ပြောပြပါသူမ၏နာမ။ သူမေးမြန်းသောအရာကိုသူမ၏အမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယျသို့အဘယ်သူမျှမနေပါစေနာမကိုအမှီသည်၊သူမ၏ပြောပြပါရဲ့အလှမည်။ ပြောပြသင်လုံးဝရှိသည်ဖို့သွားရပေမယ့်အကြောင်းသိချင်ပါတယ်နောင်လို့အနည်းဆုံးရရန်ကြိုးစားနှင့်သူမ၏အရေ၊ဒါကြောင့်သင်သိမှရသူမ ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်မှာ။ ဆို၊’ကျွန်မတကယ်ဆန္ဒရှိတယ်သင်သိမှရယခုအဘယ်အရာကိုသင်ပြအလွန်ကြီးစွာသောကောင်လေးသည်ငါဖြစ်၏၊ငါမူကားရန်ရှိသည်သွားရသည်။…
ကျွန်တော်မပါဘဲအသက်မရှင်အင်တာနက်ခေတ်၊စမတ်ဖုန်းများနှင့်အတိုက္ခံလူမှုမီဒီယာ။ ဒါကြောင့်၊ဒါကြောင့်မဖြစ်တဲ့အကြောင်းအံ့သြအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်လူကြိုက်များမှုတိုးပွားလာသည်။ အများအပြားစုံတွဲများကိုဆောင်ခဲ့ကြပြီအတူတကွအင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊သူတို့ဟာမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးတွေ့ဆုံကြစစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ နှင့်ဤအချက်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်တစ်ဖန်အားဖြင့် ၊တစ်-နှစ်အရွယ်အီတလီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်တွေ့ဆုံ ၊တစ်-နှစ်အရွယ်အင်ဒိုနီးရှားလူတွင်နေထိုင် စွံ၊အလယ်ဂျာ။ အနီနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားသုံးပြီး နဲ့မကြာမီ၊သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးသို့ငုံချစ်။ ထိုနောက်မှ၊သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသဘောတူလက်ထပ်ဖို့အသီးအသီးအခြား၊သော်လည်းသူတို့ခဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံစစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ ငါအမှန်ချစ်နေဆဲပဲ။ လည်းကြောင်းအတည်ပြုခဲ့မေးသည်သူမ၏မိဘများ’မင်္ဂလာအတွက်အီတလီနိုင်ငံမီသူမရောက်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အချစ်ခြင်းမေတ္တာသူမ၏အသက်တာ၏။ ထို့ကြောင့်၊အပေါ်ဧပြီလ၊ နောက်ဆုံးတွင်အ ျ ရွာ၊ ခရိုင်၊ စွံ။ ဒါကြောင့်သတ္တိ၏။ သူမ၏ဆိုက်ရောက်စေတအုန်းအုန်းသဲသဲရွာအဖြစ်၊သူတို့တွေမသုံးဖို့လက်ခံင္ငံျခား ရဲ့အိမ်နီးချင်းအလျင်အမြန်တိုင်ကြားရဲတဲ့ ရဲ့ရှေ့မှောက်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အလေးရဲကြဖို့စေလွှတ် ၏အိမ်မှစုံစမ်းစစ်ဆေးအပေါ် ရဲ့ဆိုက်ရောက်။ ရဲႀကီးပထမ ။ ကပြောပါတယ်၊”ကျနော်တို့မေးခွန်းသူမ၏သောအရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်သူမရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှလာ၏။နှစ်နှစ်၊ငါကယ်တင် ငွေအရအလုပ်လုပ်မှစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌အီတလီနိုင်ငံကိုယ့်လာရန်။”စဖတ်ပါ:ပြင်သစ်မိန်းကလေးလက်ထပ်တရုတ်လေးဟုသူမလိုတဲ့ကား။ ခရစ္စမတ်ရုံထောင့်ခန့်ဖြစ်ပါသည်နှင့်ဆိုလိုကြောင်း၊ဒါကြောင့်အသစ်တစ်နှစ်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးနှင့်အတူခရစ္စမတ်ပွဲတော်။ အမှု၌သင်တို့ကိုမသိ၊ဝမ်တွင်တည်ရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်း၏ညီအစ်မမြို့ခ်င္းမိုင္တ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကက်တလောက်ထဲတွင်တွေ့လိမ့်မည်တဲ့အရည်အသွေးအမျိုးသားများအနေဖြင့်ဂျာမဏီ၊သြစတြီးယား၊ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်။ အားလုံးသူတို့အိမ်၊သူတို့အဘို့ရှာကြသည်အနက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ရလဒ်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ရှုထောင့်မှလက်ထပ်။ တူညီသောလမ်းအတွက်ပွုအဖြစ်၊သူတို့သည်လာအီတလီချိန်းတွေ့ရှာတွေ့၏မျှော်လင့်ချက်ရှိတစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ အီတလီချိန်းတွေ့-ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အထူးပြုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး။ အတွင်းနှစ်၏သမိုင်းကိုကျနော်တို့ကူညီပေးခဲ့၏ထောင်ပေါင်းများစွာအမျိုးသမီးရှာတွေ့ဖို့သူတို့ရဲ့အိပ်မက်ကိုဖော်ဖန်တီးနေတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြယုံကြည်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် စနစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြီးကြည့်ရှုသင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်။ သန်းပေါင်းများစွာ၏အထီးကျန်င္ငံျခားသားမ်ားအပါအဝင်ဂျာမန်၊အဘို့ရှာကြသည်တစ်ဦးသည်မေတ္တာမိတ်ဖက်အတွက်အရှေ့အဘို့အမင်္ဂလာရှိ၏။ အဘယ်အရာကိုဆွဲဆောင်အမျိုးသမီးမှဂျာမန်အမျိုးသားများ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့အလေ့စတင်ချိန်းတွေ့နှင့်လက်ထပ်ရန်အတွက်ဂျာမ? သင်သိသင့်သည်၊အကြောင်း:လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အဘယ်သူ၏နှလုံးဟုဆိုလိမ့်မည်’ဟုတ်ကဲ့’၏မျက်နှာသာအတွက်ယောက်ျားကနေသြစတြီးယား၊စရာရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်’ပညာ’သူတို့ကို၊သူတို့ကအမွေးနှင့်အတူကောင်းမွန်သောအပြုအမူ။ ထို့ကြောင့်၊သင်လုံခြုံစိတ်ချစွာမြှင့်မိသားစုနှင့်ခံစားကြည့်ပါ။။။။။ ဆွစ်ဇာလန်ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်ကြသည်ပေမယ်မူထူးခြားတဲ့။ သူတို့ရဲ့အလှမှလာသူတို့၏ကျန်းမာလမ်းအသက်အဘို့မိမိတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ တူများစွာသောအခြားင္ငံျခားသားမ်ား၊အမျိုးသားများအတွက်ဆွစ်ဇာလန်မှအဘို့ရှာကြသည်သောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်။ ရှာဖွေရေးအတွက်အဘို့အမိတ်ဖက်အင်တာနက်ကိုကျော်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်လှပ်အကျွမ်းများ၏အီတလီအမျိုးသားများ။ ကတည်းကအီတလီချိန်းတွေ့သည်ဂျာမန်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ဒီနေရာမှာသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အများအားဖြင့်အမျိုးသားများထံမှဟန်ဂေ၊မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်၏။ ရန်ခက်ခဲဒါဟာင့်ဖော်ပြ၏သဘောသဘာဝတစ်ဦးပြင်သစ်၊မတည်ရှိပါဘူးတစ်အတိအကျသူတို့အဘို့အဖော်မြူလာ။ သူတို့ကအတော်လေးအထူးထူးအပြားပြား၊အကောင်းတစ်လမ်းအတွက်သင်တန်း။ စပိန်နိုင်ငံသည်တစ်ပြည်အများအပြားအမျိုးသား၊ကိုယ်တိုင်မြင်တွင်မှဆက်ဆံရေးတွင်အသီးအသီးအခြားအလုနီးပါးဖြစ်နိုင်ငံခြား။ တကယ်တော့၊အားလုံးစပိန်ဘုံ၌များစွာသောရှိသည်၊ကြည့်:အဘယ်ကြောင့်တစ်ခုတည်း အီတလီမှတောင်မြှောက်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့အမျိုးသမီးအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ကြောင့်တစ်ခုတည်းအီတလီကနေဝင်ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများအမျိုးသားများနှင့်အီတလီ။ အများဆုံးတစ်ခုတည်းအီတလီတွင်နေထိုင်သောဟန်ဂေပြောနှစ်ဦးစလုံးသည်ဂျာမန်နှင့်အီတလီ၊နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤဘာသာစကားများဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်သည္။ ယာဥ္ေမာင္းလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းဝင်အနေအထားနှင့်လာတာနဲ့အမျှခမ်းနားစပျစ်ဥယျာဉ်နှင့်ပန်းဥယျာဉ်များ၊သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြလိမ့်မည်ဘီးမြတ်သောသင်အနေဖြင့်အချိန်ပါဘူးတီဆိုလိုအီတလီမှတောင်မြှောက်ကြရတဲ့အတွက်အဆင်သင့်အလာမည့်ခရီးစဉ်ႏပြင်သစ်သူတို့ပဲအစောင့်ရှောက်ဤသည်၌မထိုက်မတန်နည်းလမ်း။ ယင်းနှင်းလျှောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌၊အတွက်ဂေါက်သီး၊နွေရာသီခရီးစဉ်အရေကန်နှင့်လမ်းလျှောက်အတွက်တောင်၏ကုမ္ပဏီတွင်တစ်ဦးချိုတစ်ခုတည်းအီတလီလူလိမ့်မည်ညှို့အားလုံးသင်၏။ သူတို့ပြုသမျှ၊တစ်ခုတည်းအီတလီမှတောင်မြှောက်ပြုသေချာစွာဂရုတစိုက်မွန္မပုံမှန်သူတို့အဘို့။ အီတလီအမျိုးသားများခံစားရသက်သာခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့နေချိန်မှာတောင်ပါ။ အီတလီအမ်ိဳးတီအတွက်လိုအပ်ရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ ကာ စွမ်းရည်အနားယူအပေါ်သာထားခဲ့သည်လည်းပုံမှန်လုပ်၏တစ်ခုတည်းအီတလီနေစဉ်၊အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားများရပါတီရှိသည်။ အချစ်ကလေးများသည်အမွေးအတွက်အီတလီ။ သာရှိပါတယ်တွေ့မြင်နိုင်သည်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာဝတ်ဆင်နှင့်ကောင်းစွာ-ဆောင်ဖို့အမျိုးသမီးနှင့်အတူသူမ၏အီတလီခင်ပွန်းအနီးအနားတွန်းတဲ့အမွှာ များ၏ရှေ့မှောက်၌သူ့ကိုနှင့်လေးငယ်တစ်ဦးတင်ဆောင်လာသောသူ၏ပခုံးနှင့်အတူ၊လာသားပါ၊သူတို့ကိုနောက်ကွယ်မှာရှာဖွေနေကစားစရာသူတို့ဝယ်လိုက်တယ်။ အဖြစ်ဝေးချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်နိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်၊တစ်ခုတည်းအီတလီမှတောင်မြှောက်ပါလိမ့်မယ်စားစောင့်ကြည့်တစ်တင်းနစ်သို့မဟုတ်ဘောလုံးကွင်းတစ်ဂိမ်းအပေါ်ရုပ်သံထက်ထိုင်တစ်နေရာရာမှာဖုန်ကွင်း၊သူတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ကျေနပ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အနီး။ မေးတဲ့အခါတစ်ခုတည်းအီတလီေဘာလံုးကနေသင့်ကိုထူးခြားခြားအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများ။’ေလး’ချင်း’တွေအတူအီတလီအမျိုးသားများအတွက်အထွေထွေ၊ပြီးတစ်ခုတည်းအီတလီကနေဟန်ဂေမှတ်ပုံတင်ငါတို့ဆိုက်ကိုနှင့်အတူချိန်းတွေ့၏အီတလီနိုင်ငံအတွက်အထူးသဖြင့်။ ဒီတော့ချစ်ခင်ရပါသောမင်းသမီး၊ကြိုးစားရှာတွေ့မှအချစ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဟန်ဂေ။ တစ်ခုတည်းအီတလီသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြသည် မြောက်ဘက်တွင်အီတလီနိုင်ငံနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်အီတလီချိန်းတွေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကက်လည်းအခြားသောတစ်ခုတည်းအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများအပါအဝင်ဂျာမန်အမျိုးသားများအတွက်၊ဆွစ်အမျိုးသား၊တစ်ခုတည်းနယ်၊စသည်တို့ကို။ ဆန္ဒရှိဖို့ရှာတွေ့။
နောက်တစ်ခုရရှိနိုင်စက်တင်ဘာမှအားလုံး။ မင်္ဂလာပါလူ။ ငါ နှင့်ကျွန်မခင်ပွန်းများမှာဇွန်ငါတို့သည်နှစ်ဦးစလုံးငယ်ရွယ်ပြီးပျော်စရာ(ထင်တယ်)ပြီးနှစ်ခုရှိလှယောက်ျားလေးများ၊မိက္ခေလနှင့်လပ်သက်နှင့်။ ကျနော်တို့တီလက်ခံပစ်ခတ်နေ။ ကျွန်မအလုပ်အတွက်စူပါမားကက်အဖြစ်တစ်ဆိုင်မှာလက်ထောက်နဲ့ဘားတစ်ခုထဲမှာလည်း၊ကျွန်မခင်ပွန်းအတွက်အီတလီလေတပ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီတစ်ခုရှိတာကြောင်(ဇာတ်ကောင်)နှင့်ကြီးမားတဲ့အနက်ရောင်ကယ်ဆယ်ရေးခွေးကလေးဟုခေါ်။ ကျနော်တို့ဘာသာျပန္ခ်က္ခဲ့ အပြုသဘော အတွေ့အကြုံများ၊သူတို့ရှိသည်အားလုံးဖြစ်လာမိသားစုတူနှင့်သူတို့မှန်မှန်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ကျွန်တော်စဉ်းစားကိုယ်ကိုကိုယ်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့အရူးမိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးယောက်ျားလေးများအချက်စောင့်ရှောက်သင်၏ခြေကိုအပေါ်၊ငါကတိပေးပါတယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ပျင်း။ စဉ်းစားလျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ကို၊ကျနော်တို့ချင်ပါတယ်သင်အလေးအနက်ဒီယူရန်နှင့်ကုသအဖြစ်မည်သည့်အခြားအလုပ်တစ်ခုပေမယ့်လည်းဒီကုသအဖြစ်အသက်တာအတွေ့အကြုံနိုင်မည့်လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ဖြစ်နိုင်သည်ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူပါနှင့်တွေ့ရှအသစ်အသက်လမ်းဖြစ်၏။ ကျနော်တို့လိုသူတစ်စုံတစ်ဦးသည်ပျော်စရာ၊မေတ္တာနှင့်ဂရုစိုက်မည်သူသီချင်းဆိုပြီးကခုန်ခြင်း(ဝါးဝါး)ငါနှင့်အတူ)နှင့်စောင့်ရှောက်မည်အယောက်ျားလေးများနှင့်ဖျော်ဖြေရေး။ ကျွန်တော်တို့မယ်လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုပွင့်ကောက်ဖို့ကျောင်းကနေစသည်တို့ကို။ ကျနော်တို့တီရုံတစ်စုံတစ်ဦးချင်အလုပ်လုပ်ဖို့ငါတို့အဘို့အ၊ကျနော်တို့တစ်စုံတစ်ဦးချင်စိတ်အပိုင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစု၊ကြီးမားတဲ့အစ်မသို့မဟုတ်အစ်ကိုများအတွက်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကောင်လေးတစ်ယောက်သူမိခင္ဘာသာအဂၤလိပ္စာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်သားဖြစ်လာရန်လုံးဝရာင္စပ္ေပဳႏိုင္ျ။ နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားကိုပြောမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းဗမာဒါပေမယ့်အခုတော့ကျနော်တို့အပေါ်အလုပ်လုပ်နေထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို။ ချင်ပါတယ်သင်သင်ပေးဖို့သူတို့ကိုဗမာအားဖြင့်ဂိမ်းကစားခြင်း၊ပဟေဠိ၊ပန်းခြံသွားစသည်တို့ကို။ နှင့်ငါ့ခင်ပွန်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်လွန်ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်အဲဒီလိုဖြစ်ရန်မလိုအပ်များအတွက်သင်လေ့လာသင်ယူဖို့အီတလီမဟုတ်လျှင်သင်ချင်။ သင်အမြဲအများနှစ်ရက်တစ်ပါတ်ချွတ်။(စနေနေ့-တနင်္ဂနွေ)၊နေစဉ်သင်ဒီမှာပါ၊ကျွန်တော်ကြိုက်မယ်လို့သင်ထွက်ကိုကူညီအနည်းငယ်နှင့်အတူအိမ်မှုကိစ္စများ၊ဘာမှမအနက်၊ပဲအမှုအရာကဲ့သို့လှုပ်ရှားခြင်း၊ခပ်မှိန်မှိန်အထုတ္သည္၊တော်တော်များများနှင့်အခြားသာမန်အိမ်အလုပ်အကိုင်များ။ ကျနော်တို့တီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်အဘယ်အချိန်အိမ်ပြန်ညဉ့်အခါသို့မဟုတ်လျှင်ထွက်လာပြန်သည်နက်ဖြန်နေ့၌၊သို့သော်၊ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတဲ့အခါသင်ထွက်သွား။ ချင်ပါတယ်သငျသညျပျော်စရာရှိသည်ချင်ပေမယ့်ဘေးကင်းလုံခြုံသင်စောင့်ရှောက်ဖို့အငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်ချစ်ကြလျှင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အချိန်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဖြစ်ချင်ဖြစ်လာပြီးခံစားရ၏အစိတ်အပိုင်းမိသားစု၊ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏၊ဒီတီသင်မနေရ။ ကျနော်တို့အသက်ရှင်သောအတွက်အသုံးတိုးတက်အိမ်အပေါ်ထပ်ကအိပ်ခန်းနဲ့တစ်ရေချိုးခန်းသင်ရှိသည်လိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိပ်ခန်းနှင့်အတူစားပွဲခုံ၊တီဗွီ၊စာအုပ်စင်၊ ရိုနှင့်ဗီရို။ အလယ်ကြမ်းပြင်ကျနော်တို့အခမ်းအနားကမီးဖိုချောင်နှင့်အခြားရေချိုးခန်း။ အပေါ်အောက်ခြေကြမ်းပြင်ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဧရိယာထိုင်လျက်၊တစ်ရေချိုးခန်းနှင့်အခြားမီးဖိုချောင်။ ရေချိုးခန်းထပ်လည်းတစ်ရေချိုးခြင်းကြောင်းသင်ရှိသည်နိုင်အဖြစ်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်။ အဆိုပါဧရိယာအဘယ်မှာရှိငါတို့သည်ဟုခေါ်သည်နေထိုင် ၊ဒါကြောင့်နီးစပ် ။ ပဲမိနစ်အက။ သာ အများကြီးရှိပါတယ်အရက်ဆိုင်နှင့်ဖးရဲ့၊ကျွန်တော်တစ်ဦးရှိစာတိုက်နှင့်စူပါမားကက်အတွင်းအားလုံးလမ်းလျှောက်အကွာအဝေး။ သင်အသုံးပွုနိုငျသောဆိုင်ကယ်စီးလုံးသို့ စင်တာသို့မဟုတ်ပိတ်ဖို့အားဖြင့်မြို့။ အဲကအီတလီအတန်းအတွက် ၊နံနက်ဘယ်မှာသွားနိုင်ပါတယ်နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်၊(ဆောင်းတွင်းအချိန်)ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့သင်မှတက်။ ယခင်အတိုက်လုံးအတွက်ရုန်းကန်သောကြောင့်သူတို့ကြောင့်စိတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ဆရာအဖြစ်ဘဲအင်္ဂလိပ်စကားပြော၊သို့သော်၊လူတိုင်း၏ကွဲပြားခြားနားသော၎င်း့တစ်ကြိုးစားရကျိုးနပ်စိတ်ဝင်စားဆိုရင်။
အဘယ်မှာရှိ။ အခါထိုအကြောင်းကြောင့်။ အဘယ်ကြောင့်မကြိုးစားလူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အဘယ်ကြောင့်မကြိုးစားရှာတွေ့စရာမလိုပါတယ္။ နည်းနည်းငါ့ကိုလည်းသင်ကူညီချင်တာရှင်းပြဖို့သာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်ပြီးနောက်သင်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း။ အကြှနျုပျအလုပ်ယူပြီးကျွန်မကိုကမ္ဘာအဝှမ်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်အချိန်မှာမိန်းမသည်ခက်ခဲ။ ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ယုံကြည်နှင့်တစ်ခုအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အချိန်။ ငါအမှန်အစဉ်အမြဲအရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းအသက်ရှင်သော ။ ငါကဲ့သို့သောသဘာဝ၊ဓာတ်ပုံရိုက်။ ငါရိုးသားသော၊ရိုသေလေးစားမှု၊ကြိုက်ကုမ္ပဏီ၏စိတ်နှင့်လူ၏အပြုသဘောစဉ်းစားတွေးခေါ်၊ငါလုပ်နေတာငါ့အလိုရှိသမျှသောအရာတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းကြောင့်။ တူဟင်းချက်၊စျေးဝယ်ခြင်းမင်္ဂလာအမြင်အခြားသူများ။ ဆင်းမြေကြီးမိသားစု။ ချစ်နိုးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတစ်ခုတည်းပြုလုပ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ရရန်အမှန်တကယ်အခွင့်အလမ်းဆုံဆွဲဆောင်မှုယောက်ျားရှာဘို့မိန်းကလေးများကနေအီတလီနိုင်ငံအဘယ်သူမျှမနေပါစေအရာကိုမျိုးကိုသင်ဆက်ဆံရေးများအတွက်ကြည့်ရှု။ အစည်းအဝေးနှင့်ဆက်သွယ်အီတလီအထီးကျန်ကောင်လေးတွေဟာလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့။ တွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပူးပေါင်းလွယ်ကူသောအဆင့်များကိုထည့်သွင်း၊သင့်ပရိုဖိုင်းကိုအတူဓာတ်ပုံနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖေါ်ပြချက်။ စိတျထဲမှာစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါရှာမှတဆင့်ပြုလုပ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများကိုပင်မပါဘဲ။
ငြီးငွေ့၏ အရက်ဆိုင်နှင့်ကလပ်အသင်းနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်အခြားယောက်ျားတွေအတွက်အမျိုးသမီး။ ဘယ်မှာရှိကိုသိရန်လိုခငျြတွေ့ဆုံရန်မိန်းကလေးများရှိရာ၎င်းတို့့ကိုမျှအနည်းငယ်သာယှဉ်ပြိုင်မှု။ ဒီဗီဒီယိုကိုသင်တို့အဘို့။ ကြည့်ပါ၊လူကို၊အများဆုံးယောက်ျားတွေလုပ်နေတယ်ဒီချိန်းတွေ့အရာအားလုံးမှားယွင်း။ တစ်စုံတစ်ဦးတစ်ချိန်ကကျွန်မကိုပြောပြတယ်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောင်းတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်၊အခက်ခဲဆုံးနေရာကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်။ အဘယ်ကြောင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်အတူယှဉ်ပြိုင်အားလုံးအခြားစာအုပ်များ။ ငါမသိဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေမှန်မှကြွလာသောအခါ။ လျှင်သင်သွားလာရင်းမှအဖျော်ယမကာ၊ကလပ်အသင်းများရှာဖွေနေသို့မဟုတ်ထို့နောက်အွန်လိုင်းသင်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်သည်အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ နားထောင်၊အများဆုံးယောက်ျားတွေအသေနတ်များဖြင့်ချဉ်းကပ်ရန်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ရလဒ်အဖြစ်၊သူတို့အဘို့အသွားကြသည်အမျိုးသမီးသူတို့မဟုတ်ပင်လိုက်ဖက်တဲ့ အတူ။ ငါ့ကိုအထွက်ကိုနားထောငျ၊မေးလျှင်သင်မည်သည့်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘယ်လိုသူတို့ဖောက်သည်များရှာတွေ့ကြဘူးဒါကြောင့်အလွန်တိကျသောနည်းလမ်း၊ကိုပစ်မှတ်ထားလူဦးရေအများဆုံးဖွယ်ရှိကြောင်းအဖြစ်လိုက်ဖက်နှင့်ဝယ်ချင်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်။ သင်လိုအပ်သောချိန်းတွေ့ကြည့်ရှုဖို့ကိုအတိအကျတူညီလမ်းအတွက်။ ပြီးသင်သည်ဤသို့ပြုလျှင်၊သင်စတင်ရန်အစည်းအဝေးနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းအမျိုးသမီးများအကြောင်းသင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်။ ထိုအခါသင်သည်ရောက်ရှိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ချဉ်းကပ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်မီးပွားကြောင်းဆွဲဆောင်မှု။ ဒါကြောင့်၊အဘယျသို့သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်လူဦးရေအချိုး။ သင်လိုအပ်ပါဘူးဖို့ရှိသည်ရှင်းလင်းသောပုံကိုမှအဖြစ်အမျိုးအစားသင်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ချင်? ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ဖြစ်နိုင်သွားမဖြစ်သင့်အဘို့အရှာဖွေနေအမျိုးသမီးအတွက်အရက်ဆိုင်နှင့်ကလပ်အသင်းမဟုတ်ပါဘူးလျှင်ပင်သို့ပါတီမိန်းကလေး။ နားလည်ရဲ့အရည်အသွေးသင့်ရဲ့စံပြမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုကူညီလိမ့်မယ်သင်ဘယ်မှာရှာတွေ့သူမထွက်ဆွဲထား။ ကပြောပါတယ်ခံရကြောင်း၊အချို့အောက်ပါနေရာများမှအယူခံလိမ့်မည်သင်သည်အစဉ်အခြားသူမဟုတ်။ ဒါပေမယ့်ခင်ပေးစာရင်းကို၏အကြှနျုပျ၏အကြိုက်ဆုံးနေရာများ၊သင်သိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါ၏အကြီးမားဆုံးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ချက်များကိုကူညီဖြည့်ဆည်းရန်အမျိုးသမီးအဖို့ပိုကောင်းသင်သည်သင်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသက်ရှင်ကွက်ပြည့်စုံနှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၏အတွေ့ဆုံ။ ဒီဘက်ပါ၊သင်တွေ့မြင်သူတို့ကိုပိုပြီးမကြာခဏသင့်နေ့စဉ်အသက်တာ။ ဒီအကြီးအကျယ်တိုးတက်လာမျိုးသမီးအရေသင်မယ်ပေါ့။ အထူးသဖြင့်အကောင်းကိုချစ်လျှင်အားကစားနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မိန်းကလေးများနှင့်အတူအဘယ်သူကိုမကြိုက်ပါဘူး။ အများအားဖြင့်၊ဤရွေ့ကားမိန်းကလေးများအမှန်တကယ်သို့ကျန်းမာရေး၊စွမ်းအင်အလုပ်လုပ်လို ၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါ။ သေချာအောင်သင်သွားဖို့နေရာကိုသင်ပျော်မွေ့မယ့်အစားသွားသောသူတို့ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ရှိပါတယ်ပိုပြီးချစ်စရာမိန်းကလေးငယ်များ။ ကြောင့်သင်ပိုကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မွေ့လျော်။ အသက်ရှင်သောခွေးရှိသည်။ ထိုအခါကဒီမှာသွား။ သူမ၏နီးကပ်ကြီးပိုပြီးလွယ်ကူပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ချက်ချင်းတစ်ခုခုရှိဘုံ၌။ တယောက်ကိုငါ့အကြိုက်ဆုံး၏ သည်မိန်းကလေးတစ်ဦးအဘို့အခွေးနှင့်အတူငါမှငါ၏မိတ်ဆွေကောင်း ကယ္ဗင္က”ဟေ့ဘယ်အရာကိုတစ်ဦးကချစ်စရာပိုင်ရှင်ရှိသည်။”သင်ဝယ်ယူအစားအသောက်ဆိုင်။ ကောင်းစွာ၊သူသည်ဖြစ်နိုင်မလည်းအထူးသဖြင့်လျှင်၊သူမသည်ကျန်းမာရေးအသိစိတ်။ ကြိုးစားမြေတပြင်လုံးအစားအစာ။ ငါ့အတွေ့အကြုံ၊က်န္းမာေရးအစားအစာစတိုးဆိုင်ရှိပါတယ် အများကြီးစုံလင်မိန်းကလေးများထက်တိုင်ပင်သို့မဟုတ် ။ အခုဆိုရင်သင်ဖတ်သို့မဟုတ်အလုပ်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့? ကောင်းပြီ၊ဦးခေါင်းကျော်ရေပန်းစားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကို။ တချို့အကြောင်းပြချက်အဘို့၊အပူအမျိုးသမီးချစ် ။ ၎င်း့မျိုး၏တစ်ဦးပေါ်လာခြင်း။ ထွက်ဆွဲထားအတွက်စုံတွဲတစ်တွဲနာရီ၊ထိုင်ဘယ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်လွန်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းသင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အတွေ့။ လျှင်သူမသည်အလုပ်ရှုပ်စာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သေချာအောင်၊အသိအမှတ်ပြုရန်သူဘာလုပ်နေတယ်၊ဟေး၊ငါသည်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပြန်လည်ဖတ်ရှု။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကျော်လာသောအမှန်တကယ်မြန်ဆန်ပြီးပြောမင်္ဂလာပါ။ ပူပြင်းတဲ့အမျိုးသမီးများသောအားဖြင့်အလုပ်ထွက်တော့ရှာတွေ့ရှိရာအားကစားရုံအားလုံးမိန်းကလေးငယ်များတက်ရောက်။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါအားကစားရုံမှာသူတို့အဖို့ရှိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးချစ်သူချက်တင်ဒါလိုရင္းတိုရွင္းႏွင့္။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရှင်းပြီးချီးမွမ်း၊အရည်အချင်းပြည့်မှီ၊အနီးကပ်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်သူမနက်ရှိုင်းစွာဆွဲဆောင်ဖို့သင်အောက်မှာမိနစ်။ ဟုတ်၊အများစုမှာချက်ပြုတ်အတန်းနှင့်ပြည့်စုံမှသာအမျိုးသမီး။ အကောင်းဆုံးအခြေအနေအခါမျိုးသမီးအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကြောင့်သူတို့မယ်ကျော်ကိုစစ်တိုက်ခြင်း။ သငျသညျဂီတချစ်ကြလျှင်၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤသင်သည်သင်၏စက်အပြောက်။ ကြီးမားသောဂီတပွဲတော်များ၏တန်ချိန်များအမျိုးသမီးနှင့်သူတို့အားလုံးကြည့်ဖို့ပျော်စရာရှိသည်။ အနိုင်ရ အဆိုပါမိန်းကလေးကျော်၊ပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပျော်စရာရှိခြင်း။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်မိန်းကလေးဆင်မြန်းကောင်း၊ထို့နောက်သေချာ ပပါ။ အကောင်းဆုံးအကြိမ်များသောအားဖြင့်စနေနေ့နံနက်။ ကျွန်တော်သိတဲ့မိန်းကလေးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်တကယ်ချစ်တဲ့ကောင်လေးမှအကြှနျုပျကိုချဉ်းကပ်နေစဉ်ငါသည်သင်တို့ကိုအပြေးပါ၏။ ဤအအံ့သြ။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့လျှင်၊သူမသည်အပြေး၊သူမတစ္ခုအလေးသော။ ဒါကြောင့်၊သင်အပြေးသမားအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိရနေသာကမ်းခြေနှင့်အတူတင်ဆောင်ကြသည်လှပသောအမျိုးသမီးအတွက်မိန်းမရေကူးဝတ်စုံရတဲ့သူတို့ရဲ့အညိဳ။ အဆိုပါအရာသည်အများဆုံးယောက်ျားတွေလည်းခြိမ်းခြောက်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုအတွက်မိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ဦးမိန်းမရေကူးဝတ်စုံ-ဒါကြောင့်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်၊သင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်မယ်။ ပင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်ကောလိပ်၌ပင်လျှင်သင်၏’့သို့ဤသူကားငါ၏အကြိုက်ဆုံးနေရာမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတစ်ဦးပစ်မှတ်ငွေရတတ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပြည့်အဝလူငယ်ပညာတတ်သူအမျိုးသမီးစိတ်အားထက်သန်နေကြသည်လူမှုရေး။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ခရီးသင့်ဒေသခံတက္ကသိုလ်နှင့်လမ်းလျှောက်သွားသို့မဟုတ်အလည်အပတ်တစ်ဖီးနယ်မြေနှင့်တက်ဒဏ်ခတ်စကားပြောဆိုချက်။ ယခုသင်ကြောက်သောသူမမေးပါလိမ့်မယ်သင်အဘယ်ကြောင့်သင်ရှိတယ်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သူတို့နီးပါးဘယ်တော့မှမ မေး။ သူမပါဘူး၊သူမ၏ပြောပြပါသင်လမ်းလျှောက်ယူပြီး၊သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအကော်ဖီဆိုင်သို့မဟုတ်ရှိသည်သောမိတ်ဆွေတစ်ဦးအဝင်ကြောင်းလည်းရှိလျှင်၊ထိုသို့ဟုတ်မှန်င်။ သို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ကြောင်းပြောမကြိုက်ဘူးအစည်းအဝေးအမျိုးသမီးမှာအရက်ဆိုင်နှင့်ကလပ်အသင်းများသူတို့ကြောင့်လည်းယစ်မူးခြင်းနှင့်မသေချာ။ သငျသညျအံ့သြသွားဖြစ်မှာဘယ်လိုအမျိုးသမီးများစွာသောမေတ္တာအဖြေ။ ပူးပေါင်း အုပ်စုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းသင်မွေ့လျော်ကြောင်းကဲ့သို့သောအတွက်တောင်တက်သို့မဟုတ်ဝိုင် ။ သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အခြားအမျိုးသမီးတူညီသောဝါသနာ၊ဒါကြောင့်သင်ချက်ချင်းချိတ်ဆက်မှုရှိပြီးကြောင်းပြောဆိုရန်အရာတစ်ခုခု။ သင်သည်လည်းယူဆွေးနွေးပွဲများသို့မဟုတ်အတန်းအကြောင်းအကျိုးစီးပွား။ ငါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်သောအမျိုးသမီးများ၏ချစ်တက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကဲ့သို့ ကြွယ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြပ်မတ်နှင့်အမျိုးသမီးများသောအားဖြင့်ယဉ်ကျေးမှု။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့တယ်ဆိုရင်တကယ်တစ်ခုခုသို့အမှန်တကယ်ရှိသမျှသောမိန်းကလေးဖော်ရွေဖြစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းသို့မဟုတ်ပစ်ခတ်မှုသေနတ်များသို့မဟုတ်ျမန္မာႏိုင္ငံတိုက်ပွဲများ။ ယခုပင်လျှင်သင်၏အကြိုက်ဆုံးပတ္ဝန္းက်င္၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ရုံမြင်ရတဲ့အဆင်းလှသောမိန်းမကိုဆင်းလျှောက်လှမ်းလမ္း၊သေချာအောင်သင်ချဉ်းကပ် သူမကြောင့်သော်လည်းသင်အရာကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်သူမ၏အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်သူမ၏သဟဇာတသင်အလွယ်တကူထွက်ရှာတွေ့။ ၏အားသာချက်ယူအားလုံးအခွင့်အလမ်း။ ငါသည်ဤအခမဲ့စကားလက်ဆုံ၏ရှင်းတမ်းခိုးချဘယ်မှာငါဖြိုချအတိအကျအဘယ်သို့ဆိုပြီးနောက်”ဟို”ကိုလုပ်ချင်တယ်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်နှင့်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသင်ပြအတွေ့အမျိုးသမီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ထွက်ကိုစစ်ဆေးဒီနေရာကိုနှိပ်ပါအသက်ရှင်တာက်င္းအချိန်ဇယား။
© 2019 ဗီဒီယိုက ချက်တင် အီတလီ